Ywar Thar Lay (YTU): 10/1/08
အမှောင်ထဲကလူအတွက် အလင်းရောင်ဆိုတာ တစ်ကယ့်မျှော်လင့်ချက်။ အလင်းဆီကို ရောက်ဖို့ ဘယ်လောက်နှစ်တွေကြာကြာ ဘယ်လောက်ပင်ပန်းပင်ပန်း မလှမ်းဖူးဆိုတဲ့လူ ရှိနိုင်မယ်မထင်။
မြန်မာပြည်မှာ ကျောင်းပြီးလို့ ဘွဲ့ရကာစ လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ အိပ်မက်က ဘာများဖြစ်နိုင်မှာတဲ့လဲ။ လူငယ်ပီပီ တက်ကြွမှုအပြည့်နဲ့ အောင်မြင်မှုဆိုတာတော့ လိုချင်တာပေါ့။ စီးပွားရေးပဲလုပ်မလား အလုပ်တစ်ခုခု ၀င်လုပ်မလား။ စတဲ့ တွန်းအားတွေနဲ့ပါ။
ကျနော်ကျောင်းပြီးတော့ ကျနော့မှာလဲ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ပေါ့။ ကျနော့ကို ကျနော်လက်နက်အပြည့်တပ်ဆင်ထားတဲ့ တိုက်ပွဲဝင်တစ်ယောက်လို နှစ်ထောင်းအားရရှိနေခဲ့တာ။ အိမ်ကိုခဏပြန် ရန်ကုန်ကို ပြန်တက် အလုပ်လုပ် တစ်ခုတော့ ငါသေချာပေါက်ရမှာဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်နဲ့။
အလုပ်ဆိုလို့ ကျနော်လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကလည်း တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ခေါ်တာနဲ့ကြုံခဲ့တယ်။ လုပ်ငန်းကြီးတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းဆိုတော့ အိပ်မက်တွေဖြစ်ရပြန်တာပါ။ တကယ်တမ်းကျတော့ အင်တာဗျုးတောင်မပါခဲ့။ ဒီတစ်ခေါက်ရွေးချယ်မှုက အတွေ့အကြုံရှိပြီးသား သူများသာတဲ့။
နောက်တစ်ခုကျတော့ အင်တာဗျုးလည်း ပါခဲ့ပါတယ်။ မေးခွန်းတွေကိုလည်း ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြေဆိုနိုင်ခဲ့တယ်။ သူတို့ရဲ့ ငြင်းပယ်ချက်က အသက်ငယ်လွန်းပြန်သတဲ့။ အသက်သုံးဆယ်လောက် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် လိုချင်တာပါဆိုတော့ ဘယ်လို ဖြေသိမ့်ရမလဲမသိတော့။
ကျောင်းပြီးခါစ လူငယ်တစ်ယောက်က အတွေ့အကြုံ ဘယ်ရှိနိုင်ပါ့မလဲ။ ဒီအတိုင်းဆိုရင် အတွေ့အကြုံမရှိလို့ အလုပ်မခန့် အလုပ်မခန့်လို့အတွေ့အကြုံမရှိနဲ့ပဲ လုံးချာလည်နေတော့မှာ။ အသက်…ကျောင်းပြီးကာစ လူငယ်တစ်ယောက်က အသက်သုံးဆယ်ဘယ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲနော်။ ငယ်ပေမယ့် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့လား။
အင်တာဗျူးပေါင်းများစွာကို ဖြေဆိုနေခဲ့တာ။ သိပ်ကိုဆိုးဝါးတဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ခုလည်း ကြုံခဲ့ပါသေးတယ်။ မသိပါဘူးလို့ကြိုတင်ဝန်ခံထားတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ပညာရှင်ဆန်ဆန်မေးခွန်းတွေနဲ့ မေးရင်း စာသင်ပေးမယ့်ဆရာတစ်ယောက်လို ဟိုလိုလုပ်ပါလား ဒီလိုလုပ်ပါလားလို့ အပြောခံရတဲ့ အင်တာဗျူးပေါ့။ အင်တာဗျူး ပြီးရင် သူ့ဆီမှာ ဘ၀ကိုဘယ်လို စရမလဲဆိုတာ ကျောင်းသွားတက်ရမယ့်ပုံစံပါ။ ပုဂံဆိုက်ဘာတက်ထင်ပါတယ်။
အလုပ်ရှာရင်း စိတ်ဓါတ်တွေလည်း အကြိမ်ကြိမ်ကျခဲ့ပါတယ်။ အလဲလဲအပြိုပြို ဖြစ်ရတဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ ထပ်ပြီး ရှာနေရတဲ့ ဒုက္ခကို အရမ်းစိတ်ပျက်မိတယ်။ ယုံကြည်ချက်တွေ မရှိတော့လောက်အောင် အားငယ်ရတယ်။
အပြင်ကိုထွက်လာတော့လည်း ပြည်တွင်းမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ တကယ်ကို ယုံကြည်ချက်ကြီးခဲ့ပြန်ရော။ တကယ်တမ်းကျတော့ ထင်တာတွေက လွှဲချော်မြဲ။ ကားမမောင်းတတ်ပါဘူးရေးထားပါလျက် အင်တာဗျူးခေါ် ပြီးတော့မှ ကားမမောင်းတတ်တဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ပယ်တယ်ဆိုတော့ စိတ်တိုမိပြန်ရော။ တောင်းမိတဲ့ သတ်မှတ်လစာကို မင်းရသင့်တယ်ထင်လို့လား ဆိုတဲ့မေးခွန်းအမေးခံရဖူးတယ်။ အသားတွေ တဆတ်ဆတ်တုန်အောင် ဒေါသထွက်ခဲ့ပင်မယ့် သူများတွေရရင် ငါဘာကြောင့်မရနိုင်ရမှာလဲဆိုတဲ့ အဖြေကို အေးအေးဆေးဆးဖြေနိုင်ခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ သိပ်စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတယ်။ တန်ဖိုးမထားတဲ့ လူတွေ့စာမေးပွဲတွေကို အချိန်ကုန်ခံပြီး ဖြေနေခဲ့မိသလိုပဲ။
အခုလည်း ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးစီးပွားရေး ကျဆင်းမှုနဲ့ ကြုံနေရပြန်ပြီ။ အားလုံး ခံနေရတာဆိုတော့ တောင်မင်းမြောက်မင်းမကယ်နိုင်တော့ဘူးထင်ပါတယ်။ လူလျော့တယ် လစာလျော့တယ်ဆိုတဲ့ အသံတွေကို ကြားနေရပြန်ပြီ။ အများအားဖြင့်လျော့တာက နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားတွေကိုပါ။ အဲဒီတော့ ဟိုက စီစီ ဒီက စီစီ ကြားလိုက်ပြန်ရင် ပြန်ကြရပြန်ပြီ။
နောက်ပိုင်းအလုပ်လာရှာကြတဲ့ လူတွေတော်တော်များများ အလုပ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့ ညီးညူသံပဲကြားနေရတယ်။ စနေနေ့သတင်းစာမှာတောင် ကိုယ်နဲ့ သင့်လျော်တာ လေးငါးခြောက်ခုတောင်မနည်းတဲ့။ အခုရာသီက ကွင်းပြောင်းလို့မကောင်းပဲ ဘောနပ်စောင့်နေကြတဲ့ အချိန်ဆိုတဲ့ ဈေးကောင်းတော်တော်ရမှ ကွင်းပြောင်းကြတာလေ။ နဂိုကမှ ရှားပါးချိန် စီးပွားရေးက လာကျနေတယ်ဆိုမှတော့ ဘယ်လိုလုပ်ရပ။
နောက်ထပ်နောက်ထပ် လူငယ်ခြေတက်တွေကလည်း အိမ်ကွင်းကို စွန့်ပြီး အဝေးကွင်းကန်ဖို့တကဲကဲ။ တော်ကြာမေးကြပြန်ပြီ။ အဲဒီလာရင် ဘာလိုလည်း ဘာလုပ်လာရမလဲ ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲ စသည် စသည်။
အလင်းရောင်ဆိုတာ အမှောင်ထဲက လူအတွက် တကယ့် ရတနာပါ။ အင်း အဲဒီအလင်းတိုင် မငြိမ်းပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းနေမိတာ အမှောင်ထဲက ကိုယ်လိုလူတွေအတွက်ပါ…………
Posted by Anonymous at 6:50 PM 13 comments Links to this post
လူတိုင်း လူတိုင်းမှာ လျှို့ဝှက်ချက်ကိုယ်စီ ရှိနေကြမယ်ထင်ပါတယ်။ လျှို့ဝှက်ချက်ဆိုတဲ့အတိုင်း ဖုံးကွယ်ထားတတ်ကြတာမို့ မမြင်လွယ်မသိလွယ်ဘူးပေါ့။ မှောက်ထားတဲ့ ဖဲချပ်လေးနဲ့တူပါလိမ့်မယ်။ ၀ှက်ဖဲလေးပေါ့ဗျာ…
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းအတွက်ဆိုတဲ့ ၀ှက်ဖဲလေးတွေဆိုရင်တော့ လွတ်လပ်စွာကိုင်ဆောင်ခွင့်ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအ၀ိုင်းကို ပါ ထိခိုက်စေမယ့် ၀ှက်ဖဲဆိုရင်ကော။ ဘယ်လောက် ထိခိုက်နစ်နာစေမလဲဆိုတဲ့ အချက်တွေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ရမယ်ထင်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့လက ၀ှက်ဖဲတစ်ချပ်အတွက် ကျနော်စိတ်ဓါတ်တော်တော်လေး ကျခဲ့ရပါတယ်။ အိပ်မပျော်တဲ့ညတွေလည်း များခဲ့တာပေါ့။ အလုပ်ထဲက ကျနော်ယုံကြည်ရတဲ့ အလုပ်အကိုင်သိပ်တော်တဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ၀ှက်ဖဲလေးကြောင့်ပါ။ ဘယ်လိုမှထင်မထားမိတဲ့ အဖြစ်အပျက်မို့ ဒီနေ့အထိတော့ အိပ်မက်တစ်ခုလိုပါပဲ။ တော်တော်လေးကြာတဲ့အထိ ကျနော်ဟာ သူ့ဘက်ကနေ ရပ်တည်ပေးနေတုန်း။ သက်သေ သာဓကတွေ ခိုင်လုံလာတဲ့အခါမှာတော့ မငြင်းနိုင်တော့ပေမယ့် မယုံရဲသေးဘူးလေ။ နောက်ကနေ တစ်ယောက်ယောက်ကများ ချောက်ချလေသလားဆိုပြီး မျှော်လင့်နေမိသေးတယ်။ နောက်ဆုံးသူဝန်မခံသေးဘူးဆိုတော့ အကြောင်းထူးရှိနိုင်ကောင်းရဲ့ ထင်နေမိတယ်။ သူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မိရင်တောင် ကျနော်က မျက်လွှာအရင်ချမိတယ်။ သူ့ကို ရဲရဲကြည့်ရမှာလို့အားနာမိလို့ပါ။ မသင်္ကာတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ ကြည့်နေတယ်လို့ သူယူဆမှာစိုးရိမ်လို့ပါ။ အဆုံးသတ်မှာတော့ သူ့ဆီက ၀န်ခံချက် SMS တစ်ခုရလိုက်ပါတယ်။ တကယ့်ကို ထိခိုက်နာကျင်ရပါတယ်။ တစ်လလုံးလုံး အစစ်ဆေးခံ အမေးမြန်းခံရမယ့် ဘ၀ကနေ လွတ်မြောက်သွားပေမယ့် ကျနော်မပျော်ရွှင်ခဲ့ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လုပ်ရက်ပါလိမ့်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ပါ။ ရုံးတစ်ခုလုံးလည်း အုံးအုံးကြွက်ကြွက်ဖြစ်သွားကြတယ်။ တစ်ချို့လူတွေက နောက်ဆုံးအချိန်ကျမှာ သူ့ရဲ့ဝှက်ဖဲကို သိလိုက်ရတာ။ ကျနော်ကတော့ ကျနော်သိနေပါတယ်ဆိုကို သူမသိအောင် သူ့မျက်စိရှေ့မှာတစ်လလောက် နေခဲ့ရတာပါ။ အဲဒီဝှက်ဖဲရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုက ကျနော်တို့ကို အထက်လူကြီးတွေ ယုံကြည်မှု ကျဆင်းသွားစေခဲ့မယ်ထင်ပါတယ်။
ကံဆိုးတာလား ကံကောင်းတာလား မသိနိုင်လောက်အောင် တစ်ချို့ဝှက်ဖဲတွေကို ကျနော်သိနေတတ်ပါတယ်။ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တာပဲလား ကံတရားကြောင့်ပဲလား အနားက၀ှက်ဖဲတွေကို အမှတ်တမဲ့ တွေ့ရတတ်တယ်။ အဲဒီဝှက်ဖဲတွေတိုင်းအတွက် အခါများစွာ စိတ်ဓါတ်ပျက်ပြားဖူးပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ကျနော်ထင်မှတ်မထားတာတွေ ဖြစ်နေတတ်လို့ပါ။ အရိုးခံစိတ်နဲ့ ပြောမိဆိုမိသမျှအတွက် အရမ်းကို တုန်လှုပ်မိတယ်။ တစ်ချို့ဝှက်ဖဲတွေကို သိရတဲ့အခါမှာ ကျနော့အတွက် လောကမှာ ဆက်လက်ရပ်တည်စေဖို့ ခဲယဉ်းစေတဲ့အထိပါ။ အနီးဆုံး အခင်ဆုံး အချစ်ဆုံးဆိုတဲ့ အစွဲတွေကြားမှာ သူတို့ရဲ့ဝှက်ဖဲတွေက သွေးပျက်စေတဲ့ ဆောင်းအိပ်မက်တွေ ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့အထိလေ။ တစ်ခါတစ်ခါ သိပ်ကြောက်ဖို့ကောင်းသလို တစ်ခါတစ်ခါ ရွံ့မုန်းဖို့ကောင်းပါတယ်။
အကယ်၍သာ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် အဲဒီဝှက်ဖဲတွေကို ဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့မှ ကျနော် မသိချင်ခဲ့ပါဘူး။ သိရတာနဲ့ ထိခိုက်နာကျင်ရတာမို့ပါ။ များများသိလေ ပိုစိတ်ပင်ပန်းလေမို့ ဖြစ်နိုင်ရင် မျက်စိမှိတ် နားပိတ်ခွင့်ကို တောင်းချင်မိတယ်။ အသံတွေ အရုပ်တွေကလည်း ပဲ့တင်သံတွေ နံရံတွေကနေတစ်ဆင့် ပိတ်ထားတဲ့နားတွေထဲအတင်းဝင် မှိတ်ထားတဲ့ မျက်စိကို ဇွတ်တွန်းဝင်လာတော့ ခက်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ကျနော့မှာရော ကျနော့မှာ ၀ှက်ဖဲတွေ ရှိသလား? ကျနော့ ၀ှက်ဖဲတွေအတွက် ဘယ်သူတွေ ထိခိုက်နာကျင်စေခဲ့မိပြီလဲ။ ဘယ်သူတွေက အဲဒီဝှက်ဖဲကို မြင်သွားပြီလဲ။ ကျနော့ဝှက်ဖဲတွေကကော သိပ်ကြောက်စရာကောင်းနေသလား တွေးနေမိရင်း မှောက်ထားတဲ့ ဖဲလေးတစ်ချပ်ကို လက်နဲ့တစ်အားအုပ်ဖို့ကြိုးစာနေမိတော့တာ……..
Posted by Anonymous at 10:29 PM7comments Links to this post
Posted by Anonymous at 8:25 PM 15 comments Links to this post
နွမ်းကြွေမလွယ်တဲ့ ပန်းခရေငယ်ရဲ့ရာဇ၀င် (၁)
ခရေပန်းဆိုတာ မွှေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အကြွေလွယ်သတဲ့။ တဖွဲဖွဲကျနေတတ်တဲ့ ဒီခရေတွေကြားထဲမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ဘယ်လိုငြင်းမလဲ ဘယ်သူငြင်းမလဲ။ ဒါပေမယ့် အကြွေလွယ် အနွမ်းလွယ်တဲ့ အခြေအနေရောက်ခဲ့ပေမယ့် မကြွေခဲ့တဲ့ ပန်းခရေငယ်တစ်ပွင့်ရဲ့ ရာဇ၀င်ကို ဘယ်သူမှ မသိနိုင်ဘူးလေ………
ဟိုးဝေးလံခေါင်သီတဲ့ ယူနန်ဆိုတဲ့ အရပ်မှာ ဒီခရေပန်းငယ်လေးစတင်ဖူးငုံခဲ့တာပါ။ ရွာငယ်တစ်ခုက မြေပိုင်ရှင်တစ်ဦးရဲ့ သမီးငယ်အဖြစ်အေးငြိမ်းတဲ့ဘ၀ကနေ သစ်ငုတ်မြင့်တုံ မြက်မြင့်တုံ ဆိုတဲ့အတိုင်း ဘ၀အလှည့်အပြောင်းမှာ ကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့ထိစပ်တဲ့ နယ်စပ်တောင်တန်းတစ်ခု ပေါ်မှာ ပင်ပန်းဆင်းရဲတဲ့ ဘ၀ကိုနေ့ခြင်းညခြင်း ရောက်သွားတာကတော့ တကယ့် အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုလိုပါပဲ။
အိမ်လေး ဆယ်အိမ်တောင်မပြည့်တဲ့ ဒီတောင်ပေါ်မှာ ဘာစိုက်ပျိုးရေးတွေလုပ်ဖြစ်တယ်ထင်လဲဟင်။ ဘိန်းတွေ သိပ်ကိုအောင်မြင်အောင် စိုက်တာပါ။ တစ်ခြားသီးပင်စားပင်တွေ စိုက်လို့မဖြစ်ပါ။ ဆန်တွေ ဆီတွေ စားစရာတွေ အသုံးအဆောင်တွေအားလုံးကို ဒီဘိန်းနဲ့ပဲလဲလှယ်နေရတာ။ တစ်ခြားသီးပင်စိုက်လို့ကတော့ ငုတ်တုတ်မေ့သွားမှာ။ ကြမ်းတမ်းတဲ့ ဒီအရပ်မှာ စာသင်ကျောင်းဆိုတာ ဝေလာဝေး။ စားနေရတဲ့ ပြောင်းဆန်လေး ဘယ်အချိန်ရပ်မလဲ တွေးပူနေရတာ။ လည်ချောင်းမှာနင်ပြီး တစ်နေတဲ့ ဒီပြောင်းဆန်ကလွဲရင် ရွေးချယ်စရာလည်း မရှိ။တစ်နေကုန်တစ်နေခန်း အလုပ်နဲ့လက်နဲ့ မပြတ်စေခဲ့။ ခြေဖ၀ါးတွေ ကြိမ်းစပ်အောင်လမ်းလျှောက်ရတိုင်း ဒီမြေပြင်က ဆိုးဝါးလိုက်တာဆိုတဲ့ အသိကိုမြဲစေခဲ့တာ။ ဒီမြေပြင်က ခွာချင်ခဲ့တာ ဒီစိတ်လည်းပါမယ်ထင်ပါတယ်။ တစ်ခြားမောင်နှမတွေနဲ့ မတူတဲ့ နူးညံ့တဲ့ ခြေဖ၀ါးတွေကို တစ်ခါတစ်ခါ စိတ်နာမိတယ်။ အစ်ကိုအကြီးဆုံး ပြီးရင် ညီအမသုံးယောက်ရှိတဲ့ အထဲ ဒိုးတူဘောင်ဘက်မလုပ်နိုင်ကောင်းလားဆိုပြီးပါ။
တစ်နေ့ အဲဒီနေ့က နေသာပါတယ်။ စစ်ဆင်ရေးတပ်ရင်းတစ်ခုနဲ့ အတူ ဗိုလ်မှူးဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ ရွာကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ သားသုံးယောက်ပဲရှိလို့ သမီးမွေးစားချင်တယ်ဆိုတဲ့ ဗိုလ်မှူးပေါ့။ တစ်ရွာလုံးက မိန်းမငယ်တွေ ဆုံးဖြတ်ကြရမယ်လေ။ အပါးက သမီးတွေကိုတန်းစီမေးတော့တာပဲ။ ပထမ ဒုတိယ မေးပြီးတော့ အပါးဆီက စိတ်ဓါတ်ကျစကားထွက်လာတယ်။ အနေဆင်းရဲ အစားဆင်းရဲ ဒီဘ၀ထဲမှာ တစ်ယောက်စာလောက် ၀န်ပေါ့သွားရင် ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲတဲ့။ တတိယမေးမယ်ဆိုတော့ နောက်လူတစ်ယောက်ထည့်ရင် ငေါ (တရုတ်လို ကျနော်ကျမလို့ဆိုလိုပါတယ်) လိုက်မယ်ဆိုတဲ့စကားကို ပြောဖြစ်တဲ့ အထိတွန်းအားပေးစေခဲ့တယ်။ ခရေပန်းလေးငယ်ပေမယ့် သိတတ်လွန်းတယ်။ ကိုယ့်အမျိုးအဆွေမဟုတ်တဲ့ တစ်ခြားလူတစ်ယောက်ရဲ့ နောက်ကို လိုက်သွားဖို့အထိလေ။ သူနဲ့အတူလိုက်ဖို့ ရဲဝံ့စွာ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာက အစ်မတစ်ဝမ်းကွဲပါ။ ငယ်ငယ်ကတည်းက သွားအတူလာအတူမို့ အေးအတူပူအမျှ လက်ကိုဆွဲလို့ သူလိုက်လာခဲ့တယ်။
ဗိုလ်မှူးက စာချုပ်စာတန်းနဲ့ တရားဝင်သမီး အဖြစ်မွေးမယ်တဲ့။ ကျောင်းထားပေးမယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် တံလျှပ်ကို ရေထင် ရွှေသမင်အလိုက်မှားတယ်ဆိုတာ ခရေပန်းလေးနောက်မှသိခဲ့တာပါ။ မရောက်ဘူးတဲ့ အရပ် မမြင်ဘူးတဲ့ သူတစိမ်းတွေကြားမှာ မပြုံးရီနဲ့ မပြုံးကြည်ဆိုတဲ့ ပန်းလေးနှစ်ပွင့်လွင့်လာခဲ့တာပေါ့။
ရှေ့တန်းထွက်လေတဲ့ ဗိုလ်မှူးကတော့ ဒီအဖြစ်တွေကို သိခဲ့လေသလား မသိချင်ယောင်ပဲဆောင်ခဲ့လေသလား မသိနိုင်ခဲ့။ သူတို့ညီအစ်မနှစ်ယောက်ကတော့ သမီးမဖြစ်ခဲ့ပဲ ငွေဝယ်ကျွန်တွေလို။ မေမေလို့ခေါ်တဲ့ ဗိုလ်မှူးကတော်ရဲ့ အပြောအဆို အခိုင်းတွေကြားမှာ မိုးလင်းကနေမိုးချုပ်ခဲ့တာပါ။
မနက်ငါးနာရီမထရင် အပြောအဆိုတွေ မညှာတာခဲ့ပါဘူး။ အလုပ်အကိုင်မှားရင် တစ်သက်စာ မှတ်စရာတွေ ဖြစ်အောင်ပြောထွက်ရက်ခဲ့သူပေါ့။ ခရေပန်းလေးကတော့ တစ်ခါမှားပြီး နောက်ထပ်မမှားရအောင် နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောရတယ်ဆိုတာ မရှိအောင် ကျင့်ကြံနေထိုင်ခဲ့တာပါ။ ကျောင်းစာဖတ်ဖို့ဆိုတာ ဝေလာဝေး ဒါပေမယ့် ဘ၀အသိတွေ ပြည့်ညှပ်နေအောင် အောက်ခြေကနေ စခဲ့ရတာဆိုတော့ ကျေနပ်ပါတယ်လေ။ မြန်မာလိုမတတ်တဲ့ ညီအစ်မနှစ်ယောက် နောက်တော့ တရုတ်စကားကိုမေ့သွားပြီး မြန်မာလိုသာပြောတတ်ခဲ့ပြီဆိုမှတော့ သန်းခေါင်ထက်ညဥ့်မနက်တော့ပြီပေါ့။
တနေ့ထက်တနေ့ ဆိုးဝါးတဲ့ရက်တွေကို ခါးစည်းဖြတ်ကျော်ရင်း အစ်မငယ်ရဲ့ လွတ်မြောက်လမ်းကိုရှာကြရအောင်ဆိုတဲ့ စကားကို ကြားလာရတယ်။ ဒီလိုဘ၀မျိုးနဲ့ ငါတို့ဆက်နေဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့။ အင်းဟုတ်တယ် ဒီလိုဘ၀မျိုးတော့ ဆက်နေလို့မဖြစ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အချိန်မကျသေးဘူးဆိုတဲ့ စိတ်ကလည်းလွန်ဆွဲနေသေးတယ်။ ထွက်ပေါက်တစ်ခုကို လွယ်လွယ်ကူကူရှာသွားလေတဲ့ အစ်မငယ်ကတော့ ဗိုလ်မှူးအိမ်က ဒရိုင်ဘာတစ်ယောက်ရဲ့နောက်ကို ကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်ရင်း ဘ၀အသစ်ကို စတင်သွားခဲ့တယ်။ အပြစ်မတင်ရက်ပါဘူးလေ….
Posted by Anonymous at 8:07 AM4comments Links to this post
Posted by Anonymous at 10:10 PM7comments Links to this post
အိုဘယ့် တီးလှည့် စောင်းသခင်
စောင်းကြိုးကိုညှိပြီး မတီးခဲ့ရင်တော့ သာယာချိုမြိန်တဲ့ စောင်းသံကိုကြားရလိမ့်မည်မဟုတ်။ မထိတထိ ထိရန်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဆိုပေမယ့် စောင်းသံမှ ပီပီပြင်ပြင်မကြားရတာနော်။ တစ်ပုဒ်လောက်တော့ ပြီးဆုံးအောင်တီးကြည့်ပါလား………..
စောင်းဆိုတာ ရင်ခွင်မှာတစ်ချက်ပိုက်တာနဲ့စောင်းတီးတာမှမဟုတ်တာ။ ထိစပ်မှုတွေရှိနေတတ်ပေမယ့် စောင်းတီးနေတာလို့ မဆိုနိုင်ပြန်ဘူး။ လေတိုက်ရုံလောက်နဲ့ စောင်းသံကိုကြားရလိမ့်မယ် ထင်နေတယ်ဟုတ်လား။
စောင်းကြိုးဘယ်နှစ်ကြိုးရှိသလဲ။ ဘယ်ကြိုးက အသံအချိုဆုံးလဲ။ စောင်းကြိုးတွေကိုညှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်း ကြိုးတွေကုန်စင်အောင် ညှိသင့်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတစ်ကြိုးကျမှ အားမထည့်ပဲထားခဲ့ရက်တယ်။ အင်း အဆုံးထိ မညှိခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်း အစတည်းက ဒီစောင်းကိုမထိပါနဲ့လား။
ပြန်ချလိုက် ကောက်ကိုင်လိုက်နဲ့ ဘာတွေ ချီတုံချတုံဖြစ်နေတာပါလိမ့်။ စောင်းသံကိုကြားချင်တာ မဟုတ်လားဟင်။ ဒီ့အတွက် ဘာတွေများပူပန်ကြောင့်ကျနေပါလိမ့်။ ရဲရဲရင့်ရင့် တင်ပုလ္လင်ထိုင်ပြီး ရင်ခွင်က ဒီစောင်းကို အချိုဆုံးဆိုတဲ့ တေးတွေနဲ့ ထွေးသိပ်သင့်ပါတယ်လေ။ တစ်လောကလုံးလည်း ကြားရတာပေါ့။
စောင်းက အိုနေလို့။ စောင်းက…… စောင်းက…..အို ဆင်ခြေတွေပေးမနေပါနဲ့လေ။ မတီးချင် တီးချင်ဖြစ်နေတာတဲ့လား။ အင်း တကယ်တမ်းက အာရုံက စောင်းဆီမှာမှ မဟုတ်ခဲ့တာ။ အထီးကျန်ဖြစ်နေတဲ့ အခိုက်အတန့်အတွက် အဖျော်ဖြေခံ ပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ်သဘောထားခဲ့တာမဟုတ်လား။
စောင်းဆိုတာ စားပွဲပေါ်မှာချထားလဲ စောင်းပါပဲ။ ကြမ်းပြင်ပေါ်ချထားလဲစောင်းပါပဲ။ ဘယ်လိုပဲပြောင်းပြောင်း စောင်းရဲ့အနှစ်သာရက စောင်းသံချိုတွေပေးဖို့ပါ။ တီးမယ့်သူက ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ စောင်းကြိုးတွေကို တို့ထ်ိခဲ့ရင် ရင်ဘတ်ထဲက အသံတွေကို မိုးတွေရွာသလို ပြန်လည်ရွာချပေးမယ့် စောင်းပါ။
တီးသူမရှိလို့ မမြည်တဲ့အခါ စားပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ တစ်ခြားအရုပ်တွေလို အလှပြရုံသက်သက် တန်ဖိုးဖျက်တော့ မခံချင်ဘူး။ တန်ရာတန်ဖိုးပေးစွမ်းမယ့် စောင်းသခင် ဆီမှာ အိုဘယ့် တီးလှည့်စောင်းသခင်လို့ ပြောဖို့ကိုလည်း ၀န်မလေးတော့ပါဘူး။ ကဲ…တီးမယ်မဟုတ်လားဟင်……………
ဒီအတွေးကို ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့ ညစာစားပွဲက ရပါတယ်။ စောင်းကို ညှိသွားပြီး မတီးသွားခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ စကားလေးကို ပြောပေးသွားတဲ့ အစ်မကြီးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
Posted by Anonymous at 8:33 PM 13 comments Links to this post
သိပျအံ့သွသှားသလား မမွဝငျး….ပနျးသုံးပှငျ့ဆိုတာ ထငျခငျြတိုငျးထငျ မွငျခငျြတိုငျး စရာ မိနျးကလေး သုံးယောကျမဟုတျပါဘူးဗြာ။ ဘုရားတငျဖို့ဝယျလိုကျတဲ့ ပနျးသုံးပှငျ့ကစတဲ့ ဇာတျလမျးပါ။ ပွီးခဲ့တဲ့ လပွညျ့နကေ့ ဖားအောကျကြောငျးမှာ ဥပုသျယူရငျး ဘုရားပနျးတှကေို ကွညျ့ပွီး အိမျက ဘုရားစငျမှာ လှူခငျြစိတျတှေ တဖှားဖှား။ ပနျးတှကေို မွငျတော့ အဟောငျးတှေ အသဈဖွဈပွနျရောလေ…….
ကွာပါပွီ ကွာခဲ့ပါပွီ။ ဖိုးသား ဟိုဘကျတဈခငျးလောငျးခအြေုံး ဆိုတဲ့ ဆရာအံ့အသံကို ကွားယောငျမိနတေယျ။ ဝယေံရှိုငျးက ငိုနလေို့ ဖိုးသားရေ ပွီးရငျ ပနျးတှေ ခူးပေးလိုကျပါဦးဆိုတဲ့ အနျတီနုအသံကလညျး ထပျကွပျမကှာ။ ကနြျောဆောငျးတှငျးဆို အလုပျလာလုပျရတဲ့ ဆရာအံ့စိုကျခငျးပါ။ လူငှားတှလေညျး ရှိပမေယျ့။ ကနြျောက နှဈတိုငျးအလုပျလာလုပျဖွဈတယျ။ ပွနျရတဲ့ အဖိုးအခက ဆရာအံ့သငျပေးတဲ့ အင်ျဂလိပျစာပေါ့။ ကြောငျးလခမတကျနိုငျတဲ့ ကနြော့အတှကျ ပွနျလညျပေးဆပျနိုငျတာဒါပဲရှိတယျလေ။
ဆရာအံ့စိုကျခငျးမှာက နှငျးဆီရယျ၊ ဂန်ဓာမာရယျ အတနျးတှေ အတနျးတှမှေ အမြားကွီး။ ဂန်ဓာမာတှကေတော့ အခုပနျးသုံးပှငျ့လို yellow ball, snow ball တှလေေ။ သိပျလှတဲ့ပနျးလုံးကွီးတှပေေါ့။ ပနျးတဈပှငျ့ဖွဈဖို့ဆိုတာ လှယျတာမှတျလို့။ ပနျးသညျဆီကလှယျလှယျဝယျလို့ရတိုငျး ပနျးတှကေို ပဈစလကျခတျလုပျတဲ့လူတှဆေို ကွညျ့လို့မရတော့။ ဘာဖွဈလို့လညျးဆိုတာ ပနျးစိုကျဖူးမှ သိကွမှာလနေော့။
ပထမ မွတှေကေို စနဈတကြ ကငျြးတူးပွီး နပျထားရတာ။ မွဆှေေး သဈရှကျဆှေး နှားခြေးခွောကျတှနေဲ့လေ။ ပွီးမှ ပနျးတှကေို စနဈတကြ တိုငျးထှာပွီး ပြိုး။ ပိုးမကိုကျ အကောငျမကိုကျအောငျ ဂရုစိုကျ။ ပွာတှဖွေနျးသငျ့တာဖွငျ့ဖွနျး။ ရလေောငျးတာကို လညျး စနဈတကလြောငျးပေါ့။ အပငျလေးတှထှေကျလာခြိနျကတြော့လညျး ကိုယျ့ရငျသှေးလေးတှလေို အရိပျတကွညျ့ကွညျ့နမေိပွနျရော။
ပနျးလေးတှဖေူးလာပွီဆိုရငျတော့ အပြျောဆုံးက ကနြျောပဲထငျပါရဲ့။ ပနျးစိုကျတဲ့ ဘဝကကွညျနူးစရာကောငျးလိုကျတာနျော။ လိပျပွာတှဝေဲသလို လမျးသှားလမျးလာတှကေလညျး အိုး….ဒီအခငျးက သိပျလှပါလားဆိုရငျ ခွထေောကျနဲ့မွကွေီးမထိတော့။ တကယျတော့ အဲဒီပနျးခငျးက ကိုယျနဲ့လညျးမဆိုငျ ကိုယျလညျး မပိုငျ။
ပနျးတှခေူးခြိနျရောကျရငျတော့ လကျတှတေုနျနပွေနျရော။ နှမွော တာလညျးမဟုတျ ဘာလညျးမဟုတျ။ ပနျးတှကေို ရှရှလေးကိုငျ တဈပှငျ့ခငျြးကို ရငျနာနာနဲ့ ဖွတျနတေတျတာ။ ဖိုးသားရယျ နငျခူးနတော ဒီနပွေီ့းရောပွီးမှာလားဆိုရငျ ကနြော့ဆီက ပွီးမှာပေါ့ဗြာ ခငျဗြားတို့က စိတျကိုမရှညျဘူးနဲ့ပွနျအျောမိတတျတယျ။ ဟုတျတယျလေ ပနျးလေးတှေ နာသှားရငျ သူတို့သိမှာလားဗြာ။ ပနျးလေးတှမှေ စကားမပွောတတျတာ။
နောကျတဈယောကျကတော့ ပနျးလာကောကျနကွေဖောကျသညျ။ တောငျးကွီးထဲမှာ စနဈတကစြီရီထညျ့ပါဆိုမရ။ အရှကျတှခေံပါဆိုနားမထောငျ။ ကနြော့အခငျးသာဆို သူ့ကိုမရောငျးဘူး တကယျ။ ပနျးတှခေမြာ ပွှတျသိပျကွပျနတေဲ့ တောငျးထဲမှာ။ အပျေါကနေ ပုဆိုးလေးရဆှေတျအုပျလိုကျပွီးရငျ နပေူထဲမှာအကွာကွီးမသှားနဲ့ဆိုလညျး လိုကျနာမှာမဟုတျ။
တဈခါတဈခါ ကနြျောက သူတို့ကိုပွောရငျ သူတို့တှကေ ရီကွတယျ။ ဖိုးသားရယျနငျအဖွဈသညျးလှနျးတယျတဲ့။ ပနျးတှကေားပျေါတငျရငျ နငျကားစပယျယာနဲ့ စကားမြားဦးမှာတဲ့။ ငါတို့မှာ စပယျယာမကျြနှာ ကွညျ့လိုကျနရေတာတဲ့။ မတျောလို့ ခရီးသညျတှကေတကျနငျးသှားရငျ နငျတော့ ဒုက်ခတဲ့။
အငျးလေ အခုနပွေနျတှေးကွညျ့တော့ ခဏနေ အခြိနျကရြငျ ညှိုးမှာပဲကိုးနျော။ လိုကျပူနတေော့ စိတျပငျပနျးတာပေါ့။ ညှိုးသှားတဲ့ပနျးတှကေို ဘယျသူက တယုတယ အမွဲသိမျးထားနိုငျမှာလဲ။
အခုလညျး ဘုရားပနျးကပျမယျဆိုပွီး ဝယျမိတဲ့ ပနျးသုံးပှငျ့နောကျမှာ တှယျငွိနတေဲ့ စိတျက အတောမသတျ။ အတိတျထိတောငျ ပါတယျဆိုမှတော့။ သွျော…….ဘုရားပနျးနှမျးလို့ စှနျ့ပဈတဲ့အခြိနျကိုရောကျလာတောငျ နောကျထပျအသဈတငျရငျး နောကျထပျ ခံစားခကျြအသဈတှနေဲ့ ဝနေဦေးမယျထငျပါရဲ့….
Posted by Anonymous at 1:55 AM 10 comments Links to this post
Labels: အမှတ်တရ ဘဝခရီး
Posted by Anonymous at 7:47 PM 13 comments Links to this post
ရဈ၍ခှေ၍စီးလသေညျ။ အေးမွသညျ။ ကွညျလငျသညျ။ ဒီခြောငျးရသေညျ ဘေးကငျးသညျတဲ့။ တောငျကခြောငျးမို့ ဒေါသမာနျဟုနျကွီးတတျသညျလညျး ရှိသညျ။ သို့သျော ဒသေခံတို့အာလုံးခဈြကွသညျ နမ်ပဒါခြောငျးရကွေညျ။
တပေါငျးလပွညျ့နတှေ့ငျ ဘုရားပှဲစတငျပါပွီ။ နှဈဆနျးတဈရကျနအေ့ထိရှညျကွာသော ပှဲတျောစပွီ။ သဘာဝဘေးအန်တရာယျ အမြိုးမြိုးသော ရနျစှယျမြားမှ ကာကှယျထားသော သံကှနျခွာတို့ပှငျ့လပွေီ။ အထဲတှငျမတော့ ဘုရားခွတေျောရာ အဆူရှိသညျ။ ခွတေျောရာခှကျတှငျကနျြခဲ့လသေော ရှံ့ရေ မြားကို အားပါးတရ ယူငငျပူဇျောကွသညျ။ အောကျစကျတျောရာ ဖှငျ့ပွီးလြှငျ အထကျစကျတျောရာ ဖွဈမညျ။ အောကျစကျတျောရာ အောကျခွတှေငျလညျး ခြောငျးရကေ ကှဝေို့ကျ၍ ပူဇျောသညျ။
အောကျစကျတျောရာမှသညျ ထိုးထားသော ဝါးတံတားကိုကူးရမညျ။ ထိုမှတဈဖနျမတျလသေော စောငျးတနျးကို အားခဲ၍တကျဖို့ပွငျ။ သံတနျးတှေ ထိုးထားတာမို့ အားယူရနျ အရှိနျရပါသညျ။ စောငျးတနျးတဈလြှောကျ လကျဆောငျဝယျလိုက ဝယျနိုငျသညျ။ စိတျပုတီးမှသညျ ခတျေပျေါ လကျကောကျမြိုးစုံရှိသညျ။ အမှတျတရဖွဈခငျြစရာသညျ ဗောစကိုငျးစိမြားကို အလှထိုးထားသော ပိုကျဆံအိပျငယျမြားဖွဈသညျ။ စောငျးတနျးတဝကျဆုံးပွနျတော့ ကယျြလှငျ့တဲ့ ဇရပျနဲ့ ဘုရားတဈဆူကိုဖူးရမညျ။ တကယျတမျးတော့ ကားနဲ့ဒီခရီးကို တကျ၍ရသညျ။ နောကျထပျအမော့မှာ အအေးဆိုငျလညျးရှိသညျ။ အညာကလာဖှငျ့သော ကရမကျဆိုငျတှရှေိသညျ။ မှေးသညျ အီသညျ။ ဝယျမှဖွဈမညျဆိုသောသူမြား ဝယျကွသညျ။
အားမာနျဖွငျ့ပွနျတကျသညျ။ တဈထဈ နှဈထဈပွီးတော့ တဈခြိုးနှဈခြိုးရောကျပါပွီ အထကျစကျတျောရာဆီ။ ခွတေျောရာပုံစံတူကို ဖူးအပွီး ခွတေျောရာကို ငုံ၍တညျထားသော ကိုးတောငျပွညျ့စတေီကို ဦးခသြညျ။ လကေလညျးတဖှဲဖှဲ နဲ့ ပငျ့၍ပငျ့၍တိုကျပါသညျ။ ရှစေက်ကူတှေ လှငျ့နသေညျလေ။ အောကျကိုငုံ့ကွညျ့မိသညျ။ လှပသော ခြောငျးအဝှအေ့ဝိုကျအတိုငျး တဲကြောငျးတှကေ အစီအရီ ဆိုငျခနျးတှကေ တသီတတနျး။ ဟိုရှဒေီ့ရှေ့ ဆော့လတေဲ့ မြောကျတှလေညျး တှရေ့တတျသညျ။ ပုပ်ပားနဲ့ဖိုးဝငျးတောငျက မြောကျတှလေိုမဆိုး။
အားပွညျ့လာတော့ အရှဘေ့ကျကိုလြှောကျမိပွနျရော။ ညောငျထောကျသူတှေ ဝါးလုံးကိုစီကိုငျထားပွနျပွီ။ ဆိုငျရှငျက ခဏနတေော့ ဝါးလုံးတှသေိမျးသှားရော။ အငျးတဈပတျလညျနတောပေါ့။ ဇီးကှကျရုပျကလေး ခွထေောကျကွားမှာလညျး ဘုရားတဈဆူရှိပွနျသညျ။
လှကေားမွငျပွနျတော့ တမော့ ထပျတကျမိပွနျရော။ ကပျြတနျအုပျလဲထားသမြှ ဒီလှကေားမဆုံးမခငျြးထညျ့မညျ။ လှကေားဘေးတဈဖကျကတော့ ဗဒေငျခနျးတှကွေီး။ မေးခငျြသူမြား မေးခငျြရာမေးနိုငျသညျ။ ပိုကျဆံမတတျနိုငျပါက ကွှဗေဒေငျပဈနိုငျပွနျသေးသညျ။ သောကျရအေိုးတှကေတော့ အတျောအေးပါသညျ။ မုဆိုးဒူးထောကျကွီးသညျ လူအမြိုးမြိုးလဲသျောလညျး သူ့မျောဒယျအခနျးက မပွီးသေး။ အောကျထပျကားရပျနားစခနျးမှာလညျး ကနြော့ညီရှိပါသေးတယျဆိုလညျး မရ။
ဟိုးဘကျကတောငျတှကေိုလညျး ငေးကွညျ့နိုငျသေးသညျ။ သို့သျောခရီးတာရှညျနပွေီ။ ဒူးကိုမညှာပါက ညကြ ဒုက်ခလှလှတှမေ့ညျ။ တဖွညျးဖွညျးခွငျးပွနျဆငျးရငျး စြေးတနျးဖကျ ဦးလှညျ့ရပွနျသေးသညျ။
မြှဈခွောကျတှစြေေးပေါသညျ။ မွဇောဥတဈပွညျလောကျတော့ ဝယျရမညျ။ မုံရှာစောငျတှနေဲ့ စတီးပစ်စညျးဆိုငျတှေ ရှိသေး။ ပခုက်ကူသနပျခါးသညျတှလေညျး တှရေ့တတျပွနျသညျ။ မကှေးက ကွေးထညျတှလေညျး လာရောငျးသညျ။ ခငျြးပစ်စညျးတှလေညျး ရနိုငျသလောကျ သယျရမညျ။ မတေ့ော့မလို့ တဈခါ တဈခါ ရှသေမငျတှလေညျး အလှပွထားတတျသညျကော။ သှားကွညျ့ရဦးမညျ။ ရနျကုနျက လာဖှငျ့သော ဆိုငျမှ ကွေးအိုးဆိုသော ထူးဆနျးသော အရာကိုလညျး မွညျးစမျးရဦးမညျ။
ခြှေးစို့လာတော့ ခြောငျးရကေို ပွနျစိမျမိပွနျရော။ အေးမွတဲ့ ရအေလဉျြမှာ ငါးလေးတှကေို လိုကျဖမျးမိတတျပွနျသေးသညျ။ ကြောကျစရဈတှမွေငျရတဲ့ အထိ ကွညျလငျနတေဲ့ရဖွေဈသညျ။ ဒီခြောငျးရသေညျ အထကျစကျတျောရာအထိ တကျခဲ့သညျဆိုတာ ယုံနိုငျဖှယျပငျမရှိ။ သို့သျော တကယျဖွဈခဲ့သညျက အမှနျ။
၀ုနျးဝုနျးဆိုတဲ့ အသံတှကွေားသညျ။ နောကျထပျဧညျ့သညျတှေ လာပွနျပွီပေါ့။ မြောကျကလေးတှလေိုဖွဈနတေဲ့ သူတို့မကျြနှာသူတို့ကွညျ့ရငျး ပွကျရယျပွုနကွေသညျပဲ။ ဖုနျတှကေလညျး ပေါ , ပေါနိုငျလှနျး။ ဒါပမေယျ့ ခြောငျးထဲဆငျးလိုကျတာနဲ့ အဲဒီပငျပနျးမှုတှေ မသှေ့ားရောလေ။
ညဖကျဆိုရငျတော့ တိတျဆိတျတဲ့ လှပတဲ့ညဖွဈမညျ။ လတေအေးအေးနဲ့ ဝါးကပျတဲတှမှောတညျးရသညျလေ။ မနကျဆှမျးတျောကပျဖို့ ဆှမျးခကျြ အပျရမညျ။ တဲကြောငျတှနေားမှာ တနျးစီဆှမျးခံကွှမယျ့ ကိုယျတျောတှကေို မနကျဆှမျးလောငျးလှူမညျ။ အောကျစကျတျောရာမှာ ဆှမျးတျောကပျမညျ။
တဈရေးဆိုပွီးအိပျလိုကျသညျ။ စိတျကတော့ စီးနတေဲ့ နမ်ပဒါခြောငျးနဲ့အတူ……………….
Posted by Anonymous at 5:45 PM5comments Links to this post
Posted by Anonymous at 3:32 PM 8 comments Links to this post
စောစောကပြောခဲ့ပါပကော နောက်တစ်ခေါက်သွားလည်း အိုကေပါဆို။ ပြန်လာတာမှ မကြာသေး။ ကျောင်းက ဒီနှစ်ခရီးစဉ်က တောင်ကြီးပါ။ အားလုံးက မလိုက်မနေရဆိုပြန်တော့ ကြက်တူရွေးကတော်တော် မယ်ဘော်ကခပ်ကဲကဲ၊ မပင့်ခင်က အရင်ကြွချင်တဲ့ ကိုယ့်အတွက် ဖိုးကျိုင်းတုတ်ပေါ့။
ဒီတစ်ခေါက်တော့ ကျနော်အရင်က သိပ်စီးချင်နေတဲ့ တိုးကား အပြာရောင်တွေနဲ့ပါ။ ကားနှစ်စီးထဲဖြစ်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေ မဆုံခဲ့တာအမှတ်တရ။ ဆရာမတွေကားခွဲလိုက်ရတာမို့ ကျနော့ဆရာမက အသက်ကလည်းကြီးပြီ ကျနော့ကိုလည်း သူနဲ့လိုက်စေချင်၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ခွဲစီးရမှာမို့ သူ့မလဲအားနာ။ နောက်တော့ ဆရာမတို့ကားနဲ့ပဲလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ မမယု၊ မမဆုတို့နဲ့တော့ တစ်ကားတည်းပေါ့။
ကားစထွက်တော့ ကျနော်ပေးဖွင့်ခိုင်းလိုက်တာ Banquet။ မင်းသမီးသိပ်ကြိုက်လို့ပါ။ ကားက တစ်စင်းကိုတစ်စင်းစောင့်ရင်း တော်တော်နောက်ကျမှထွက်ဖြစ်တယ်။ နေ့လည်စာကို မင်္ဂလာဒုံက Million coin မှာ။ တိုးကားကြီးနှစ်စီးဆိုတော့ ဆိုင်တစ်ခုလုံးကို ပြည့်နှက်သွားတော့တာ။ မှာရင်းအော်ရင်း ရှုပ်ယှပ်ခက်နေတဲ့ နေ့လည်ခင်းတစ်ခုပေါ့။ စားပြီးသောက်ပြီး ကားပေါ်ပြန်တက်တော့ ကားပေါ်မှာ တောင်းဆိုမှုတွေက နှစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပြီ။ ဇာတ်ကားပြန်ကြည့်ချင်တဲ့လူနဲ့ သီချင်းနားထောင်ချင်တဲ့လူဆိုပြီး။ နောက်ဆုံးတော့ ဆရာနီကိုလာ စကားနဲ့ ဇာတ်ကားကိုပဲဆက်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ကျနော်က မင်းသားနဲ့မင်းသမီး ဓားသိုင်းဆော့တဲ့အခန်းကို အရမ်းကြိုက်တယ်လေ။
လမ်းမှာတော့ ကျနော်တို့အားလုံး သိပ်မသိကြသေးတာမို့ အားလုံး ငြိမ်သက်နေတာပေါ့။ ပဲခူးရောက်သည်အထိ မလှုပ်ကြသေး။ နောက်ခုံက အစ်မတစ်ယောက်ဆို တိုးဂိုက်မို့ ခရီးအပြန်နောက်တစ်ခေါက်လိုက်ပါလာတာ။ အိပ်ရေးပျက်လာပုံပါပဲ အိပ်လိုက်တာ တော်တော်နဲ့မနိုး။ လမ်းတစ်ဝက်ရောက်တော့ ကျနောတို့ စလှုပ်လာပါပြီ။ သီချင်းတွေလည်း ဆို။ နောက်တော့ မေးကြည့်ဖြေကြည့်ဆော့ဖြစ်ကြပါတယ်။ တော်တော်ကို ရီရတဲ့ ကစားနည်းတစ်ခုပါပဲ။ အစ်မလတ်တို့နဲ့ ရင်းနှီးခဲ့တာပေါ့။ သီချင်းအဆိုကောင်းလေတဲ့ မမေ၊ အပြောင်အနောက်မှာဘုရင် မစု၊ တစ်ချိန်လုံးအိပ်နေပြီး ဟာသတွေပြောတဲ့ မသန္တာ၊ ပုံပြင်တွေပြောပြတဲ့ ဆရာအောင်စံဖြိုး။ တစ်ကားလုံးကို ဆူညံနေတော့တာ။
ကားရဲ့ဟိုဘက်ခြမ်း ဒီဘက်ခြမ်းနှစ်ခြမ်းခွဲ မြို့နာမည်တွေ ရုပ်ရှင်နာမည်တွေ ဖွက်ကြတော့တာ။ နိုင်ချင်ဇောနဲ့ ပြလေတဲ့ ဟန်ပန်တွေ ဖော်မရလို့စိတ်ညစ်ညူးတဲ့ပုံတွေ တလွဲတွေ ဖော်လို့ တစ်ကားလုံး ၀ါးလုံးကွဲတဲ့အဖြစ်တွေပေါ့။ ကစားနည်းလည်း ပြီးရော နာမည်အသစ်တွေကို ရလို့ ဂွေးချို တို့ ဖာပွန်တို့ကိုဖြစ်ကရော။
ညစာကိုဘယ်မှာစားပါလိမ့်။ ကျနော်တို့ကားက နောက်ကျနေတာမို့ အတော်လေးဆာနေပြီ။ စားပြီးထွက်လာတော့ ကျနော့အစ်ကိုတွေက ထုံးစံအတိုင်းအသောက်ဇယားဆွဲနေလေရဲ့။ ဒီခရီးက ရန်ကုန်ကမို့ထင်ပါရဲ့ တော်တော်လေးကြာကြာမောင်းရတယ်။ ခရီးပန်းပြီးလမ်းမှာ မမူးစဖူးခေါင်းတွေမူးနေခဲ့တယ်။ သောက်ရတဲ့ဆေးတွေကြောင့်လည်းထင်ပါတယ်။ ခန္ဓာရှိတော့ ဝေဒနာကရှိမှာပါပဲ။ ဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့ ဆရာအောင်စံဖြိုးကလည်း ဂရုစိုက်ရှာပါတယ်။ တစ်လမ်းလုံးအမ်းနေတဲ့ မျက်နှာနဲ့မို့ပါ။
အင်းထဲကို တိုက်ရိုက်ချီတက်ခဲ့တယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ အင်းထဲက ချည်ဦးထုပ်လေးဆောင်းရင်းပေါ့။ မြူတွေသိပ်မကျတော့တာမို့ အင်းလေးက သိပ်လှနေပြန်ရော။ မရောက်ဖူးတဲ့သူငယ်ချင်းတွေက တစ်အားကိုသဘောကျပြီး တစ်ဖျတ်ဖျတ်ရိုက်နေတာ ဓါတ်ပုံက memory ဘယ်တော့ကုန်မယ်မသိ။ နေ့လည်စာကို အင်းထဲမှာစား ဆိုင်မှာလူကျတာမို့ စားပွဲလည်းကူထိုးပေးလိုက်သေးတယ်။ အမြတ်အဖြစ်က အရင်ရတဲ့စားပွဲတွေမှာ အရမ်းခင်တယ်ဆိုပြီး နည်းနည်းချင်းကပ်စားခဲ့တာ။ သတိတော့ထားသင့်တယ်နော်။
ဘုရားကနှစ်ဆူကိုဖူးအပြီး ဒီတစ်ခေါက်တိုးတာ ချည်ထည်ရက်လုပ်နေတဲ့ နေရာတွေ၊ ငွေထည်ဆိုင်တွေ တိုးလာတာပါပဲ။ လိုက်သာလျှောက်ကြည့်နေမိတာ ဘာတစ်ခုမှ မယ်မယ်ရရမ၀ယ်ဖြစ်ခဲ့ဖူး။
၀ယ်ဖြစ်ခဲ့တာက လိမ္မော်သီးသည်။ အရွယ်ကငယ်ငယ်။ ကျောင်းတက်လားဆိုတော့ လေးတန်းခင်ဗျတဲ့။ ငါးလုံးကို ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ ပေးချင်သလောက်သာပေးသွားပါခင်ဗျတဲ့။ ရော် ခက်ပြီကော။ နှစ်ရာတန်တစ်ရွက်ပေးပြီး ဆက်မေးနေမိတယ်။ ကျောင်းကောမှန်မှန်တက်ရဲ့လားလို့။
ဒီတစ်ခါတည်းဖြစ်တာက အေးသာယာမှာပါ။ အရင်အခေါက်တွေတုန်းက အခွင့်မကြုံလိုက်ရတဲ့ အေးသာယာပေါ့။ သိပ်လှတယ်လေ။ ကျနော်တို့သူငယ်ချင်းသုံးယောက်ကို တစ်ခန်းပေးပါတယ်။ သော့ရရခြင်းအပြေးအလွှား အခန်းရှာရပါသေးတယ်။ အခန်းရောက်ဖို့တော်တော်လျှောက်ရသေးတယ်။ မမယုတို့ မမဆုတို့ကတော့ တော်တော်လေးအဝေးမှာ တည်းရပါတယ်။ အဝေးကလူတွေကို ကားတွေနဲ့လိုက်ပို့ပေးတာတွေ့ရတယ်။
ရေချိုးပြီး ယောက်ဖုကိုဖုန်းခေါ်ဖြစ်တယ်။ သူနဲ့က မင်္ဂလာဆောင်မှာပဲတွေ့ဖြစ်ခဲ့တာလေ။ ရိုးသားတဲ့ကျနော့ယောက်ဖုက သူ့ရုံးက ဗန်ကားလေးနဲ့ ဧည့်ကြိုရှေ့မှာလာစောင့်နေရှာတယ်။ ညစာစားဖို့ သူ့ကို အပြေးအလွှားနှုတ်ဆက်ပြီး Dinning Room ထဲမှာနေရာယူမိတယ်။ တန်းစီနေတဲ့ လူတွေကို ဓါတ်ပုံလိုက်ရိုက်ဖြစ်တာမို့ အားလုံးက အော်ဟစ်နေတော့တာ။ ကိုယ်တိုင်လည်းတန်းစီရတော့ လူတန်းကြီးကရှည်လိုက်တာ။ အကြိုက်ဆုံးက စတော်ဗယ်ရီနဲ့ နွားနို့နဲ့ ချထားတာကိုပါ။ သုံးခွက်လောက်သောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အရက်ပုလင်းဖွင့်ပြန်တဲ့ တို့အစ်ကိုကြီးတော့ ဒီတစ်ခါ ရေခဲတုံးကို ဒေါ်လာနှစ်ဆယ်လား တစ်ဆယ်လားပေးပြီးသောက်ခဲ့ရတယ်။ ပြန်လာတဲ့အထိ တစ်ဖျစ်တောက်တောက်နဲ့။ စောင့်နေတဲ့ ယောက်ဖုကို အားနာနာနဲ့ပြန်လွှတ်လိုက်ရတယ် တောင်ပေါ်မတက်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။
တစ်ချို့က Crispy ဆော့မယ်ဆိုပြီးလူစုနေပေမယ့် ခရီးပန်းနေတဲ့ ကျနော်တော့ အေးသာယာရဲ့ ညကို ၀ယ်လာတဲ့ အာလူးကြော်တစ်ထုပ်နဲ့ ၀ိုင်နဲ့ တစ်ကိုယ်တော်ဖြတ်ကျော်မိတော့တယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ ပြန်လာတော့ အိပ်နေမိပြီလားမသိ။ အရှေ့က ထိုင်ခုံမှာသူတို့တွေ စကားပြောနေကြတယ်ထင်ပါရဲ့။ အေးလိုက်တာနော်။
နောက်တစ်နေ့မနက်စုရပ်မှာ အားလုံးစုံပြီးဓါတ်ပုံရိုက်ကြတယ်။ တန်းခွဲအလိုက်ဆိုပေမယ့် ပြောင်နောက်နေတာမို့ ဆရာမတွေလည်း မနိုင်တော့ပါဘူး။ တစ်ခါတည်း ဟိုတယ်က Check out လုပ်ပြီး ကက္ကူကိုသွားဖြစ်တယ်။ ပအို့အမျိုးသားနေ့လည်းဖြစ်ပြန် ဘုရားပွဲလည်းဖြစ်ပြန်ဆိုတော့ တစ်လမ်းလုံးကို စည်ကားနေတော့တာ။ ပါလာတဲ့ နိုင်ငံခြားသားနှစ်ယောက်အတွက် ပအို့တိုးဂိုက်နှစ်ယောက်ခေါ်ရမယ်တဲ့။ စောင့် တစောင့်နဲ့စောင့်လိုက်ရတာ တစ်နာရီကျော်လောက်ကြာထင်ပ။
ကက္ကူကိုရောက်တော့ အားလုံးပျော်သွားကြတယ်။ ဘုရားပွဲဈေးတန်းက အတော်စည်နေပြီလေ။ ဓါတ်ပုံတွေအသီးသီးရိုက် ဘုရားတွေ အလီလီ ဖူးပြီး ပွဲဈေးတန်းဖက်လျှောက်ဖြစ်တယ်။ ပအို့ဝတ်စုံတွေ့တာမို့ တိုက်ပုံတစ်ထည်မေးကြည့်တော့ သုံးသောင်းဆိုပါလား။ ခဏ၀တ်ကြည့်မယ်ပြောပြီး ဓါတ်ပုံအမှတ်တရရိုက်မိတယ်။ ဆိုင်က တဘက်ပါပေါင်းခိုင်းနေတယ် နင်ရှမ်းနဲ့တူတယ်ဆိုပဲ။
ကက္ကူကပြန်ထွက်လာတော့ လမ်းမှာ ဗြောင်တောင်တောင်ပေပေကျိချကြတယ်။ ပင်းတယသွားချင်တယ် မသွားချင်ဘူးဖြစ်နေတာမို့။ ပင်းတယကလည်း ဘုရားပွဲရှိတယ်လေ။ ပိုက်ဆံထပ်တိုးပေးပြီး ပင်းတယကို သွားဖြစ်ခဲ့တယ်။ တကယ်တမ်းမသွားသင့်ဘူးဆိုတာ နောက်မှသိလိုက်တာ။ တစ်လမ်းလုံးကားတွေကို တန်းစီနေတာကိုး။
တောင်ကြီးမှာ နေ့လည်စာစားရင်း ဈေးအမြန်ဝယ်ရတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း စတော်ဗယ်ရီတစ်ခြင်းနဲ့ ခေါပုပ်ပေါ့။ အဲဒီကခေါပုပ်က ပိုမွှေးတာကိုနော့။
ပင်းတယမှာရတဲ့ အချိန်က သိပ်ကိုနည်းတယ်။ ကားပေါ်ကဆင်းပွဲဈေးတန်းထဲခဏလျှောက်ခဲ့တာပါ။ ဘုရားက တံခါးပိတ်သွားခဲ့ပြီလေ။ မြင်းလှည်းနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်တဲ့ မမယုရဲ့ ဒုက္ခကလည်းမသေး။ အစကတော့ သဘောကောင်းမလိုလိုနဲ့ ရိုက်ပြီးတော့မှ ပိုက်ဆံတောင်းလေတယ်။ ရိုးသားတယ်ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်ကို ဘယ်လိုလုပ်ပေးရပါ့။
ပင်းတယကနေ အပြန် ကလောက မြင်းမထိဂူကိုတစ်ခေါက်။ ကျနော့အထင်ရေစက်များပါသလားပဲနော်။ မြင်းမထိဂူအရှေ့က ဆိုင်လေးမှာ ရှမ်းခေါက်ဆွဲနဲ့တို့ဗူးကြော်ကို ရေနွေးပူပူလေးနဲ့ပေါ့။
ကလောကနေ တောက်လျှောက် ပြန်ဆင်းလာခဲ့တာပါပဲ။ လမ်းတစ်လျှောက် ဘယ်လောက်ကဲခဲ့မယ်ဆိုတာတော့ ပြောမနေတော့ပါဘူး။ အားလုံးပျော်ရွှင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာတော့ သေချာပါတယ်။
တော်တော်များက အလုပ်ကိုယ်စီနဲ့လေ။ ဘ၀အမော အလုပ်ခွင်ထဲက အမောတွေကို ခဏမေ့ပြီး မြို့ပြနဲ့ဝေးတဲ့ ဟောဒီအပန်းဖြေခရီးကို လိုက်ခဲ့ကြတာ။ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဆိုတော့ ဒီခရီးအောင်မြင်တာပေါ့။ နောက်တစ်ခေါက်ဆိုတာတော့ ဆယ်ရေးတစ်ရေး ကိုးရေးတစ်ရာ မသေချာတော့။
ရေးစေချင်တဲ့အကြောင်းလေးတွေ ရေးပေးလိုက်ပါပြီ ကိုရုပ်ဆိုးနဲ့ Petite ရေ။ လိုအပ်တာတွေရှိရင် ထပ်ဖြည့်ပေးကြပါလို့….
Posted by Anonymous at 12:42 PM5comments Links to this post
ပုံမှန်ပါပဲ။ အညိုရောင်အနားသတ်တွေနဲ့ အနက်ရောင်လေးတွေနဲ့ မျက်သားအဖြူရောင်နဲ့ပါပဲ။ မျက်ဆံတွေကတော့ ခပ်ညိုညို။ ဒါပေမယ့် အဲဒီမျက်ဝန်းညိုတွေကို ကျနော်ချစ်တယ်။
မိုးလေသာတဲ့တစ်နေ့မှာ Supermarket တစ်ခုကို ဈေးဝယ်ထွက်ခဲ့မိတယ်။ မသွားမဖြစ်တဲ့ကောင်တာတွေက စာအုပ်စင်နဲ့ သီချင်းခွေတွေရှိတဲ့နေရာတွေပေါ့။ အခုဒီလထွက်တဲ့ သီချင်းခွေနားမှ ခပ်ကြာကြာရပ်နေမိတယ်။
တဖျပ်ဖျပ်နဲ့ အခွေတွေလဲသွားတာ တွေ့လိုက်တယ်။ ဟိုဘက်အခြမ်းကပဲ။ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ အသံနောက်ကိုခြေရာခံမိတော့ မျက်နှာချင်းဆိုင်က မျက်ဝန်းညိုကို တွေ့ခဲ့သည်ပေါ့။ ကြောက်ရွှံ့ခြင်းမဟုတ်ပဲ ကြံရာမရ ဖြစ်နေတဲ့ မျက်ဝန်းရယ်လေ။ အတန်းချိန်နီးပြီမို့ အပြေးအလွှားပြန်ထွက်လာပေမယ့် ဒီမျက်ဝန်းက ညှို့ခဲ့သည်ပါ။ လှမ်းနေတဲ့ ခြေလှမ်းတိုင်းမှာ မျက်ဝန်းလို့များ ရေရွတ်ခဲ့မိလေသလား။
မြင်ဖူးတာပေါ့ သွားရင်းလာရင်း မျက်ဝန်းမျိုးစုံကို။ ကလေးငယ်ငယ်လေးကနေ ဘကြီးဘဒွေး ဘွားလေး ကြီးဒေါ်တွေအထိ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်မျက်ဝန်းကိုမှ ကျနော်မစွဲလမ်းဖူးလေ။ ဖျတ်ခနဲ့ အတွေ့မှာ တစ်သက်မမေ့နိုင်တော့တဲ့ မျက်ဝန်းအစုံဖြစ်ရအောင်ထိပါ။
သတိထားမိမလားပဲ။ လူတွေအားလုံးရဲ့စိတ်ခံစားမှုကို အဲဒီမျက်ဝန်းတွေက တစ်ဆင့်မြင်ရသတဲ့။ အရယ်အပြုံးအရာအားလုံးကို အဲဒီမျက်ဝန်းက စတင်တယ်ဆိုပဲ။ အပြစ်လုပ်ထားတဲ့ မျက်ဝန်းရဲ့ မရိုးသားမှုကိုလည်း ထင်ဟပ်ပေါ်လွင်စေတယ်။ စိတ်တိုတဲ့မျက်ဝန်း၊ စိတ်ဓါတ်ကျနေတဲ့ မျက်ဝန်း၊ အပျော်တွေနဲ့မျက်ဝန်း၊ ချစ်ရည်ရွှန်းတဲ့ မျက်ဝန်း… အိုးများပြားလိုက်တဲ့ မျက်ဝန်းတွေကြားထဲမှာ ကျနော်စွဲလမ်းမိသွားတာက အဲဒီနေ့က မျက်ဝန်းညိုတစ်ခုတည်းကိုပါ။
ကျနော်တွေ့လိုက်ရတဲ့အခိုက်အတန့်မှာ မျက်ဝန်းပိုင်ရှင်ရဲ့ စိတ်ကကြည်လင်ရှင်းသန့်နေမယ်ထင်တယ်။ လောဘဒေါသမောဟ ဆိုတဲ့ အရာတွေကင်းစင်နေတဲ့ အကြည်ဓါတ်ကြောင့် ကျနော်ညွှတ်နူးသွားတာဖြစ်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ အဲဒီမျက်ဝန်းညိုကို ကျနော်နောက်ထပ်မတွေ့ရတော့လို့ပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီအပြစ်ကင်းတဲ့ မျက်ဝန်းညိုကို ကျနော်ချစ်မိသွားတာ ယနေ့ထက်ထိ……
Posted by Anonymous at 10:48 AM5comments Links to this post
အချစ်ဆိုသည်မှာ ကျနော့အတွက်တော့ ၀ါးဆစ်ထဲကရေ
မတန်ခူးက မှတ်မှတ်ရရ Tag ပါတယ်။ Tag game ကို စသိတုန်းကတော့ တော်တော်လေးတုန်လှုပ်ရပါတယ်။ ရေးဖို့မ၀ံ့မရဲဖြစ်ရတယ်။ Tag တဲ့လူတွေကို လေးစားခင်မင်စိတ်နဲ့ အမြဲရေးပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မ၀ံ့မရဲတော့ ဖြစ်ဆဲ…
အချစ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ပါတ်သတ်လို့ နှစ်ပုဒ်မှတ်မှတ်ရရရေးဖူးပါတယ်။ ပထမအပုဒ်က အချစ် = သစ်ပင် ???? နဲ့ ဒုတိယက အချစ် ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ပါ။ “အဘိုးကလည်း အဖွားကို ချစ်တယ်ပြောမှာပဲ အဖေကလည်း အမေ့ကို ချစ်တယ် ပြောတာပဲ ကိုယ်ကလည်းမင်းကို ……..” ဆိုတဲ့ ဦးသုမောင်သီချင်းကို ပြေးဆိုချင်မိတယ်။ အချစ်ဆိုတဲ့ စကားက တဆိတ်လေးနက်လွန်းနေတယ်။ တိမ်မယောင်နဲ့နက် လွယ်မယောင်နဲ့ ခက်ဟန်တူပါတယ်။
ချစ်ခဲ့ဖူးသလား ချစ်တတ်ဖူးသလား ဘယ်မေးခွန်းကိုမှ ကျနော်မဖြေဆိုနိုင်တာ ၀မ်းနည်းစရာအကောင်းသား။ မိဘနဲ့ ခွဲရမှာစိုးလို့ ၅နှစ်သားလောက်မှာ ထိုင်ငိုခဲ့ဖူးတယ်။ ၀န်ထမ်းလောက မှာမို့ ခဏခဏခွဲရတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ငိုခဲ့ဖူးတယ်။ ခင်တတ်မင်တတ်လို့ ပြီးတော့ စိတ်ကို အဆုံးစွန်ထိလွှတ်ပေးတတ်လွန်းလို့ နာကြင်ခဲ့ပေါင်းများလှပါပြီ။
ဘာဖြစ်လို့ နှလုံးသားရဲ့ အရိပ်ကို မမြင်အောင်မသိမ်းခဲ့မိပါလိမ့်။ သူများဖတ်လွယ်မြင်လွယ်တဲ့ စိတ်နှလုံးသားနဲ့ဒီမျက်နှာကို ပိုင်ဆိုင်ရတာ ရိုးသားမှုတစ်ခုလို့ ဆိုသင့်ပါသလား။ အပြစ်တစ်ခုကျူးလွန်မိတိုင်း တခြားမကြည့်နဲ့ မျက်နှာကိုသာစိုက်ကြည့်လိုက် ထိန်းမရသိမ်းမရဖြစ်နေတတ်တယ်။ ယောက်ယပ်ခပ်နေတတ်တာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင်မုန်းမိတယ်။ ဒါတောင် ကျနော့ကိုနားမလည်တဲ့ ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ် လျှို့ဝှက် အခန်းတစ်ခုအဖြစ် ယူဆတတ်တဲ့လူတွေရှိပြန်ပါသေးတယ်။
မကြာမတင်မှာ ၂၉နှစ်ပြည့်တော့မယ် လူတစ်ယောက်မှာ အချစ်မရှိဘူးလို့ဆိုရင်တော့ တော်တော်လည်း ဖြေရကြပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘ၀အတွက်ပြင်ဆင်ရင်း နောက်ကျသွားပြီဆိုရင်တော့ ဆင်ခြင်ပေးလွယ်လိုက်တာဖြစ်နေအုံးမယ်။ အချစ်တုန်းက ကျနော်မရေးဘဲထားလိုက်တဲ့ အကြောင်းလေးတွေ ထပ်ဖြည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကိုယ်ချစ်…………..ကိုယ်ကချစ်ရတယ်။ ဂရုစိုက်မိတယ်။ စိတ်ပူရတယ်။ သူကမသိချင်ယောင်ဆောင်နေရင် တစ်ယောက်တည်း ရင်ထဲမှာ ငိုရှိုက်နာကျင်ရတယ်။ အရိပ်လိုကြည့်ရင်း ရင်ခုန်စွာနှစ်သက်နေမိတတ်ပြန်ပါသေးတယ်။ ကိုယ်အနားမှာ သူရှိပေမယ့် သူ့စိတ်က တစ်ခြား ကမ္ဘာမှာဆိုရင်တော့ ကြွေပွဲ။
သူချစ်………………သူကကိုယ့်ကိုချစ်တယ်။ ဂရုစိုက်တယ်။ အနားမှာစောင့်ရှောက်တယ်။ သူဘာလုပ်လုပ် အကောင်းမြင်တယ်။ ကိုယ့်အတွက် မကြည့်ပဲ ဂရုစိုက်လွန်းတာကြောင့် အချစ်ခံရသူမှာ အနေကြပ်အောင်ဖြစ်ရပါတယ်။ ချစ်တတ်လွန်းတယ်ဆိုပါတော့။
ကိုယ်ချစ်သူချစ်…….တကယ့်ကို လိုက်ဖက်ညီမယ်ထင်ပါတယ်။ အတူသွားအတူစားအတူနေ အေးအတူပူအမျှ။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ကို နားလည်မှုအပြည့်နဲ့ လင်တစ်ထမ်းမယ်တစ်ရွက်စိတ်ဓာတ်ရှိကြသူတွေပေါ့။
အချစ်နဲ့ပတ်သတ်လို့ ကျနော်သိထားတဲ့ ဗဟုသုတလေးနဲ့လည်းယှဉ်ပြချင်ပါသေးတယ်။ ရေရှားတဲ့ ရေခဲတောင်ပေါ်တက်ဖူးတဲ့ အစ်မတစ်ယောက်က ပြောပြဖူးတယ်။ သူတို့တောင်ပေါ်တက်တော့ သောက်ရေပြတ်တဲ့အချိန်။ ၀ါးပင်ကိုခုတ် ၀ါးဆစ်ထဲမှာ ရောက်နေတတ်တဲ့ မိုးရေတွေကို သောက်ရတယ်။ ရေငတ်နေလေတော့ တရှိန်ထိုးမော့တော့တာပါတဲ့။ ၀ါးဆစ်ကကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ ရေက အေးမြပြီးနေသာထိုင်သာ ရှိတော့တာပါပဲ။ အကယ်၍ ၀ါးဆစ်ကပုပ်နေရင်တော့ တရှိန်ထိုးမော့လိုက်တာမို့ ဗိုက်ထဲကလည်း ရောက်နေပြီ အော်ဂလီဆန်စရာလည်းဖြစ်တာမို့ ပြန်အန်ထုတ်ဖို့လည်း မလွယ်။ ကြိတ်မှိတ်မျိုချရတော့တာပါပဲတဲ့။
ကျနော့အတွက် အချစ်ဆိုတာ ၀ါးဆစ်ထဲကရေလိုပါပဲ။ ရင်ဘတ်ထဲရောက်မှ မထွေးနိုင်မအန်နိုင် ဖြစ်တတ်လွန်းလို့ပါဗျာ…………………
TAG Game သဘောကပြန် TAG ရပါသတဲ့ ဒီတစ်ခါတော့ ကျနော်ပြန် TAG ချင်တဲ့လူတွေကို TAG လိုက်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေဆိုတာ ဆိုးတူကောင်းဘက်ရယ်လို့ အဆိုရှိလေတော့ အဆင်ပြေရင်ရေးပေးကြပါဗျာ။
Posted by Anonymous at 8:39 PM9comments Links to this post
ဒီတစ်ခေါက်က အပျော်မဟုတ်သလို အလုပ်ကနေသွားခဲ့ရတဲ့ ခရီးတစ်ခု။ ဒါပေမယ့် ၂၀၀၆ ခုရဲ့ နှစ်အကုန် ၂၀၀၇နှစ်အသစ်ကို တောင်ကြီးမှာကြိုခဲ့တာပေါ့။
အလုပ်ကနေ မန္တလေးနဲ့ တောင်ကြီး စတိုတွေကို ပစ္စည်းစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ပေးလိုက်တယ်။ ဌာနအလိုက် သုံးယောက်ရွေးလွှတ်လိုက်တာပါ။ ရုံးက ယာလည်းညက်စေ ထွန်လည်းမောစေဆိုပြီး သောကြာနေ့မှရန်ကုန်ကခွာ တနင်္လာနေ့ရုံးပြန်အတက်ဆိုပြီး လွှတ်လိုက်တာပါ။
ပြည်တွင်းလေယာဉ်ခရီးစဉ် အဖြစ် Air Mandalay နဲ့စတင်ကြုံရတာပါ။ ညောင်ဦးမှာ လေယာဉ်ဆင်းတော့ ကိုယ်လည်းလိုက်ဆင်းချင်လိုက်တာ။ ပုဂံမြေကိုလည်း ကျနော်ချစ်တာကိုး။ မန္တလေး တံတားဦးကို သိပ်မကြာဖူးရောက်ပါတယ်။ တံတားဦးကနေ မန္တလေး ကိုတော်တော်သွားရသေးတာပါကလား။ မန္တလေး လေဆိပ်ကြီးကိုလေ့လာချိန်မရပါဘူး။ မန္တလေး မှာ ဒီနေ့ညလုပ်စရာရှိတာလုပ် တစ်ညအိပ် မနက်ဟဲဟိုးကိုပြန်တက်ရမယ်လေ။
မန္တလေး စတိုကိုတန်းသွားပါတယ်။ စတိုဌာနကလူတွေလည်း ရုံးပိတ်ရက်ပေမယ့် ကျနော်တို့ကို စောင့်နေရရှာတယ်။ စစ်စရာရှိတာတွေစစ်ရင်း မရောက်ဖူးတဲ့ မန္တလေးရုံးကို တစ်ခေါက်တော့ လှည့်ကြည့်မိခဲ့သေးတယ်။ အားလုံးလက်စသိမ်းတော့ တော်တော်လေးမှောင်နေခဲ့ပြီ။ ကူညီညာဝိုင်းကြတဲ့လူတွေကို ညစာကျွေးအပြီး ဟိုတယ်ကို ရောက်တော့ မိုးချုပ်နေခဲ့ပေမယ့် မရပ်နိုင်ကြသေးပါဘူး။ မန္တလေးက ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို အော့ဒစ်ဝင်ရင်း ညစာစားခဲ့ကြတယ်။ နောက်တော့ မန္တလေးအိမ်ကို သတိရတာမို့ ဆိုက်ကားဆရာတစ်ယောက်ကို မေးတော့ သူလိုက်ပို့ပေးမယ်တဲ့။ အတူလာတဲ့ လူတွေကို ပြေးပြေးပြောပြော လုပ်ပြီး မန္တလာဆောင်းကို အန်တုပြီး ဆိုက်ကားတစ်စီးနဲ့ ၃၆လမ်းအိမ်ကို သွားဖြစ်ခဲ့တယ်။ မောင်နှမတွေ မတွေ့တာကြာပြီမို့ အိပ်နေတဲ့လူတွေအားလုံးတန်းစီးနိုးခဲ့ရတာ။ နောက်တစ်ခေါက် ပြန်ဆုံဖို့ဆိုတာ ဘယ်တော့လဲမှ မသိနိုင်တာ။ ဟိုတယ်ကို ပြန်ရောက်တော့ ၁၂နာရီထိုးနေခဲ့ပြီ။ ကျောချလိုက်ရုံပဲရှိသေး မောနင်းကောကခေါ်နေပြီ။ ဘုရားကြီးကိုလည်း ဖူးခဲ့ချင်တယ်လေ။ ဘုရားကြီးကို ဦးချရင်း မျက်နှာတော်သစ်နေတာနဲ့လွှဲသွားပါလားလို့ သတိထားမိလိုက်တယ်။ နောက်တော့ အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖြစ်တယ်။ လမ်းဖြတ်သွားတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို အကူအညီတောင်းကာမှ တော်တော်ရီစရာကောင်းတဲ့ အဖြစ်ဖြစ်ခဲ့သေးတယ်။ သူက ဗေဒင်ဆရာပါတဲ့ ပထမဆုံး ၃ယောက်ကို အလကားဟောပေးပါတယ်တဲ့။ လက်ဆွဲပြီးခေါ်သွားတာမို့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မျက်ရိပ်ပြရင်းလိုက်ခဲ့ကြတယ်။ ပထမဆုံးကတော့ ကျနော်ပေါ့။ ဟောရှာပါတယ်။ အဟောခံနေတဲ့ လူရဲ့ စိတ်မရှည်မှု မယုံကြည်မှုတွေကို မြင်ဟန်တူပါတယ်။ နောက်တော့ ကျန်တဲ့ လူကြီးနှစ်ယောက်။ သူတို့နှစ်ယောက်ကိုတော့ ဘာဖြစ်မယ် ညာဖြစ်မယ် နဲ့ ယတြာချေဖို့ ၅ထောင်ဆီလောက် တောင်းထားလိုက်တယ်လေ။ အဲလိုမျိုး။ သိပ်မများဖူးဆိုပြီး ပေးပစ်ခဲ့တဲ့ သူတို့ကို အငယ်ဖြစ်တဲ့ကိုယ့်မှာ ဆူရအခက် တားရအခက်။ ဓါတ်ပုံရိုက်ရင် သတိထားကြပေါ့ဗျာ။
တံတားဦးလေဆိပ်ကို အခုမှပြန်လေ့လာမိတယ်။ တော်တော်လေးကြီးကျယ်ပါပေတယ်။ အဲဒီတုန်းက ရန်ကုန်လေဆိပ်သစ်ကြီး မဖွင့်သေးဘူးလေ။ ကော်ဖီဆိုင်ရဲ့နာမည်ကိုက ကမ္ဘာကျော် နာမည်ဆိုပါလား။ မနက်စာကို လေဆိပ်က ရောင်းတဲ့ ခေါက်ဆွဲဗူးနဲ့ပေါ့။ ဆွမ်းခံရင်းငှက်သင့်တာက ကိုစန်းထွဋ်။ ဒီနှစ်ပွဲမှာသူ့ကို တင်ဆက်သူအဖြစ်ငှားချင်တာမို့ လေဆိပ်မှာပဲ စကားပြောရင်းဖုံးနံပါတ်တောင်းခဲ့တယ်။ Dreamboard က ကိုမောင်မောင်အေးပါပါလေရဲ့။ အဆင်သင့်တာတော့ အဲလို လိုက်ရှာစရာမလိုခဲ့ဖူး။ ဒီတစ်ခါတော့ Air Bagan နဲ့ဗျ။ ဟဲဟိုးကို ဆင်းဖို့တော်တော်ခက်ပါတယ်။ မြူတွေဆိုင်း နှင်းတွေဝိုင်းနေတာမို့ မဟုတ်ရင် မန္တလေးပြန်ရောက်တတ်ပါတယ်။ ကံကောင်းတော့ ဆင်းလို့ရသွားပါတယ်။ ဟဲဟိုးလေဆိပ်ဆိုလို့ အကြီးကြီးမထင်လိုက်ပါနဲ့။ နယ်မြို့က ဘူတာရုံသာသာပါ။ နိုင်ငံခြားသားတွေ တော်တော်များပါတယ်။ ဆောင်းတွင်းမို့ထင်ပါရဲ့။ အင်းလေးကို ဆင်းမယ် ပြီးရင်တောင်ကြီးတက်မယ်ဆိုပြီး ကားငှားလိုက်ပါတယ်။ ညောင်ရွှေမှရောက်မယ်မကြံသေး တယ်လီဖုန်းကလိုက်လာပါပြီ။ နောက်လထဲမှာ ကျနော်တို့ကုမ္ပဏီက တစ်နိုင်ငံလုံးက ၀န်ထမ်းတွေအတွက် နှစ်ပတ်လည် ညစာစားပွဲရှိပါတယ်။ အဲဒီပွဲအတွက် ကျနော်စီစဉ်ပေးရမှာက ၀န်ထမ်းတွေနဲ့ အကဖျော်ဖြေမှုပါ။ အခု လူစာရင်းလှမ်းတောင်းတာတဲ့။ ကဲ အဲလောက်ထိ။ ဘယ်သူမှမကရင် ကျနော် ချိုမိုင်မိုင်တက်က ပေးမယ်ပြောလိုက်မှ ဖုံးချသွားတော့တယ်။ အင်းထဲကိုလည်း နောက်တစ်ခေါက်ရောက်ခဲ့ပြန်ပေါ့။ မစိမ်းလေတဲ့ အင်းလေးက အရင်လိုသာယာစွာဆီးကြိုပြန်တယ်။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို မမြင်ရအောင် မြူတွေဆိုင်းနေခဲ့တာ။ အင်းထဲမှာပဲ နေ့လည်စာစားဖြစ်တယ်။ ပြီးမှဖူးနေကျဘုရားနှစ်ဆူကိုဖူးပြီး ပြန်လှည့်ခဲ့ရတယ်။
တောင်ကြီးကို ရောက်တော့ ၂နာရီလောက်ရှိပါပြီ။ တောင်ကြီးရုံးက တောင်ကြီးဟိုတယ်မှာစီစဉ်ထားတာမို့ ဟိုတယ်ပြန်ရေမိုးချိုးပြီး အမြန်ပြန်ထွက်ခဲ့ရတယ်။ အနွေးထည်နှစ်ထပ်တော့ဝတ်ခဲ့တာပဲ။ ရုံးမှာလုပ်စရာတွေ အားလုံးပြီးတော့ မိုးချုပ်နေပြီ။ ညစာကို နီးတဲ့ဆိုင်မှာစားလိုက်တယ်။ ရုံးကမှာလိုက်တဲ့ ပစ္စည်းပစ္စယတွေလည်းဝယ်ဖြစ်တယ်။ ကလေးတစ်ယောက်က သူ့အမေအတွက် ဆွယ်တာဆိုလို့ ခေါင်းခြောက်အောင်ရှာခဲ့ရသေးတယ်။ ပြီးတော့ တောင်ကြီးက ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို အောဒစ်ဝင်ရပြန်ရော။ အဲဒီဆိုင်က တောင်ပေါ်မှာ ဆိုင်သစ်ဖွင့်ထားတာနဲ့ တောင်ပေါ်ဆိုင်ကို သွားခဲ့ကြရပြန်တယ်။ ဆိုင်မှာ အဆိုနဲ့ဖျော်ဖြေကြပါတယ်။ အင်္ဂလ်ိပ်သီချင်းတွေကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သီဆိုနိုင်တာမို့ မချီးကျူးပဲမနေနိုင်။ နှစ်သစ်ကူးကို အဲဒီဆိုင်မှာပဲကြိုခဲ့ရတာ။ အရိုးကွဲအောင်ချမ်းတယ်ဆိုတာ အဲဒီမှာထင်တာပဲ။ ဂျင်းဘောင်းဘီ ကိုတိုးလာတဲ့လေက သိပ်အေးလွန်းတယ်။ အအေးကြောက်တဲ့ကိုယ့်အတွက် ခေါင်းဆောင်းတွေ အနွေးထည်တွေပါပေမယ့် မလုံဖူးထင်နေမိတယ်။ ဟိုတယ်ရောက်မှပဲ နွေးနိုင်တော့တယ်။ ဟိုတယ်မှာ မေစပယ်ညိုတို့ကို တွေ့သေးတယ်။ အေးသာယာမှာပွဲလာလုပ်တာပါ။ ကျနော်တို့တော့ မနွှဲနိုင်တော့ပြီပေါ့။
ဟိုတယ်ကို မနက်၆နာရီထိုး ကားခေါ်ခိုင်းထားတယ်။ ဟဲဟိုးကိုပြန်ဆင်းရမယ်လေ။ လေယာဉ်က ကိုးနာရီထင်ပါရဲ့။ မပွင့်တပွင့်မနက်ခင်းမှာ ဈေးကိုဝင် စတော်ဘယ်ရီ ခြင်းပက်ပက်ကို ဖက်နဲ့ထုပ်လို့ ၀ယ်ခဲ့သေးတယ်။ လေဆိပ်ကိုရောက်တော့ ထုံးစံအတိုင်းစောင့်ပေါ့။ လေယာဉ်လိုင်းသိပ်အများကြီးမရှိလို့သာ။ ရင်ဘတ်မှာကပ်ထားတဲ့ စတစ်ကာကိုကြည့်ပြီး ကိုယ့်ဧည့်သည်ကိုခေါ် ပြီးတော့ အော်လံလေးနဲ့ အော် အင်းဧည့်သွားဧည့်လာများတဲ့ ဒီလေဆိပ်ကို တိုးတက်အောင်လုပ်သင့်တယ်ထင်မိတယ်။ ဧည့်လမ်းညွှန်တွေကိုလည်းတွေ့မိတယ်။ လေယာဉ်တွေနောက်ကျမှာမို့ သူတို့လည်း ရောက်ယက်ခပ်နေပါတယ်။
နောက်ဆုံးဆိုက်တာက Air Bagan ပါ။ နှစ်သစ်ပါလို့ကြိုရင်း စာအုပ်လေးတစ်အုပ်နဲ့ ဘောပင်တစ်ချောင်းဆီလက်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ဒီလေယာဉ်က နည်းနည်းကြီးတာမို့ အလာထက်စာရင်လူနည်းနည်းသက်သာတယ်ထင်ရတယ်။ ပုဂံကို ပြန်ဝင်ပြီး မကြာခင်မှာ ရန်ကုန်ကိုရောက်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခေါက်က အပန်းဖြေခရီးမဟုတ်ပဲ တာဝန်တွေနဲ့ဆိုတော့ မွန်းကြပ်မိတယ်။ ဒါပေမယ့် သက်တောင့်သက်သာသွားခဲ့ရတဲ့ ခရီးတစ်ခုတော့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပင်ပန်းတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း နောက်တစ်ခေါက်သွားမလားမေးရင်တော့ အိုကေ………….
Posted by Anonymous at 12:24 AM4comments Links to this post
Labels: ချစ်သောမြေ, ပြန်လည်ခံစားဆန်းသစ်ခြင်း
အငျးထဲမဆငျးခငျ ညောငျရှကေ အနျတီခြိုတို့ဆီအလညျသှားဖွဈတယျ။ ကြိုငျးတုံမှာ မိသားစုတဝကျလောကျရောကျနကွေတာလေ။ အမရေိကားက အမြိုးတှလောပွီး အလှူလုပျမှာမို့ တောငျကွီးကို စြေးဝယျထှကျကွတာ အိမျလုံးကြှတျ။ တအိမျလုံးကို ဘယျသူမှမရှိတော့။ အညာက ဧညျ့သညျတှလောသှားတယျပွောပွီး နောကျတဈအိမျပွောငျးကွပွနျရော။ ပညာရေးမှူးအပြိုကွီးတှေ အိမျဆိုပဲ။ ကွှမေုနျ့ကငျနတောနဲ့ အတျောပဲဖွဈသှားတယျ။ လတျလတျဆတျဆတျခူးထားတဲ့ ခရမျးခဉျြသီးတှကေို ကွှမေုနျ့နဲ့ တို့စား၊ အသားပကျလို့ ကှဲအကျနတေဲ့ ပါးနှဈဖကျနဲ့မို့ နငျတော့ အငျးသားဖွဈနပွေီလို့စနတေဲ့ ဒျေါလေးနီကို သတိရမိတယျ။ အငျးသူလေးတဈယောကျလောကျ ကောကျခဲ့ရအကောငျးသားနျော။
စီစဉျထားတဲ့ စကျလှနေဲ့ အငျးထဲကိုထှကျခဲ့ကွတယျ။ သိပျကိုလှတဲ့ ကုနျးတှငျးကနျတဈခုပါပဲ။ တှငျးတောငျကိုမရောကျဖူးပမေယျ့ အငျးလေးလှတယျဆိုတာ တကယျရောကျတော့ ပိုသခြောသှားပွီ။ ဇငျယျောတှအေစာကြှေးရငျး ကိုယျတိုငျလညျးခိုးစားနမေိတယျ။ လကျမွှောကျပဈရတာ ကွာတော့ညောငျးတာကိုးဗြ။ လှဦေးမှာမတျတပျရပျပွီး ကောငျးကငျပွာနဲ့ အမှတျတရ ဓါတျပုံရိုကျဖွဈခဲ့သေးတယျ။
ရောကျပါပွီ ဖောငျတျောဦးစတေီ။ ရှသေင်ျကနျးတှေ အပွေးအလှား လာရောငျးကွပွနျရော။ အပျေါက ဂေါပကဆီက ရှနေဲ့ သူတို့ရှဘောကှာတယျတော့မသိ။ ညီလေးအားပေးအုံးနျောဆိုတဲ့ အသံတှကွေားမှာ တကယျကိုဘာလုပျရမှနျးမသိတော့။ သနားတဲ့စိတျရယျ အကငျြ့မပါအောငျလုပျရမယျဆိုတဲ့ စိတျတှကွေားမှာ ဒှိဟဖွဈနခေဲ့တာပါ။
အရငျကမကျြနှာတျော ဘယျလိုရှိလတေယျ မသိရတော့အောငျ ရှတေုံးကွီးတှဖွေဈနတေဲ့ ဘုရားငါးဆူကို ဖူးရပါတယျ။ မန်တလေးက ဘုရားကွီးလို မကျြနှာကို ရှခေခြွငျးကနျ့သတျခဲ့ရငျကောငျးမယျလို့စဉျးစားမိတယျ။ တနျခိုးကွီးတဲ့ ဘုရားငါးဆူပါ။ ဘုရားလှညျ့တဲ့အခြိနျရောကျလို့ ဘုရားငါးဆူလုံးမြားပငျ့မိခဲ့ရငျ တဈဆူက ရထေဲမှာ ပွုတျကပြွီး မူလကြောငျးဆောငျပျေါပွနျရောကျရောကျနတေတျတယျတဲ့။ အကယျ၍ ဧညျ့ဘုရားဖူးမြား မူလကြောငျးဆောငျလာရောကျဖူးမြှျောရငျ မဖူးရမရှိလအေောငျ ပွနျလညျကွှခြီတာလို့ ဘုရားအံ့ခြီးဖှယျအဖွဈ ဒသေခံတှကေ ပွောကွတယျ။
ဖောငျတျောဦးပွီးတော့ ပျေါတျောမူ ရနျအောငျမွငျဘကျကို လှညျ့ဖွဈတယျ။ တကယျ့ကိုပုဂံက ဘုရားတှေ အတိုငျးပဲ။ ဒီဘုရားရဲ့ထူးခွားခကျြက နားတောငျးကအရှငျနဲ့။ နားတောငျးအစဈကို သိမျးဆညျးထားတယျလို့ပွောပါတယျ။ ပဲခူးငလငျြဒဏျကွောငျ့ ကှယျသှားရာကနေ အိပျမကျပေးပွီး ပွနျပျေါလာတယျလို့ပွောပါတယျ။ ရပေျေါစြေးကို မရောကျဖွဈပငျမယျ့ ဒီဘုရားဝနျးကငျြမှာ အသီးအနှံတှလောရောငျးတဲ့ လှတှေဝေိုငျးနတောမို့ ရပေျေါစြေးလေးလိုပါပဲ။
ကြှနျးမွောတှပေျေါက အသီးအနှံတှစေိုကျထားတာ အောငျမွငျမယျထငျပါတယျ။ အပွငျမှာမမွငျဖူးတဲ့ လကျနဲ့မလှျောခွနေဲ့လှျောတဲ့ အငျးသားတို့ရဲ့ရိုးရာကိုလညျး လလေ့ာခဲ့မိပွနျတယျ။ ကနြျောသာဆို လှပေျေါကနေ အခေါကျတရာလောကျပွုတျကတြောငျ လှျောတတျမယျမထငျဘူး။ အငျးလေးမှာရှာတဲ့ မိုးဆိုတဲ့ ဇာတျကားကိုပွနျလှမျးနမေိလိုကျတာ ရတှေစေငျမှ သတိရမိတယျ မကွာခငျညောငျရှပွေနျရောကျတော့မယျ။
ညောငျရှကေနေ တောငျကွီးကို ပွနျတကျတော့ နခေဲ့ခငျြမိတယျ။ အငျးလေးက သိပျဆှဲဆောငျထားတာပါလား။ နောကျတခေါကျ နောကျတခေါကျနဲ့ အခေါကျပေါငျးမြားစှာ လာလညျခငျြတဲ့အထိပါ။
တောငျကွီးကိုရောကျတော့ မှောငျစပွုနပွေီ။ ဒီနတေ့ော့ မောခမျးကို မှီလိုကျတယျ။ လူ ၈ယောကျစားတာကို ၄၀၀၀ လောကျပဲကတြာမို့ အားလုံးအံ့အားသငျ့နကွေတာ။ လိုကျလာတဲ့ ဖတေ့ပညျ့ကြျောတှကေ မုနျ့ဟငျးခါ ၂ပိဿာလောကျကို တဈထိုငျတညျးစားနိုငျကွတာဆိုတော့ သူတို့ စားအားကိုစဉျးစားကွညျ့ပေါ့ဗြာ။
ဧညျ့ဂဟောပွနျရောကျတော့ အခနျးရှမှေ့ာ ငုတျတုတျထိုငျနတေဲ့ လူတဈယောကျကို တှလေို့ကျတယျ။ အမှောငျထဲမှာမို့ မသဲကှဲဘူးဖွဈနတော။ နောကျတော့ ကနြော့ဆီလြှောကျလာတယျ။ ကနြော့နာမညျကိုချေါတော့ သခြောသှားပွီ ဒါကနြော့ ကလေးဘဝတုနျးက သူငယျခငျြး စိုးမိုး။ ၆တနျးလောကျကတညျးက ကှဲသှားကွတာ။ ပိနျသှားတယျသူငယျခငျြး။ ညောငျရှမှော အသံကွားလို့ တောငျကွီးထိတကျလာတဲ့ သူငယျခငျြး တသကျတာ ပွနျမတှတေ့ော့ဘူးထငျထားတာ တခေါကျတော့ တှဖွေ့ဈကွသေးတယျကှာ။
လူကွီးတှပေငျပနျးလို့နားပွီဆိုတော့ ကနြျောနဲ့စိုးမိုးက ဆိုငျကယျတဈစငျးနဲ့ မီးပုံပြံပှဲဆီကိုပါ။ ဘောလုံးကှငျးထဲမှာလှငျ့လှငျ့ကယျြကယျြ ပြျောဖို့လညျး ကောငျးသလို စိုးထိတျစရာလညျးကောငျးပါတယျ။ ညမီးကညျြတှကေ မတျောရငျအန်တရာယျဖွဈစနေိုငျတယျ။ မီးလောငျသှားလတေဲ့ ညမီးကညျြကွောငျ့ ဂြူးရဲ့ ညမီးကညျြ ၀တ်ထုကို သတိရမိပွနျရော။ အငျးတကယျငိုကွတာပါ။ အားထညျ့ပွီးလုပျထားကွတာဆိုတော့လေ။ တကယျအောငျမွငျသှားပွီဆိုရငျလညျး အရမျးကို တကျကွှပြျောရှငျစရာကောငျးပါတယျ။ အားလုံးစိတျလှတျကိုယျလှတျ ပြျောကွရတာ။ နတျသမီးကို ဘာဖွဈမယျမီးပုံးပြံဆိုလား အျောကွသေးတယျ။ အိမျကမိုးမခြုပျစနေဲ့လို့မှာလိုကျတာမို့ ၁၂နာရီမထိုးခငျမှာ ပွနျပို့ပေးကွတယျ။ တကယျတနျးတော့ မပွနျခငျြသေးဘူး။ စိတျကူးကောငျးတဲ့လူတှရေဲ့ မိုးပျေါကမြှ နောကျထပျမီးပုံးလေးတှေ အောကျကို ပှငျ့ထှကျကလြာတာမြိုးတှေ အထိ တီထှငျဉာဏျကောငျးကွပါပတေယျ။ သူ့ထကျသူလူစှမျးကောငျးတှရေဲ့ တဈလုံးပွီးတဈလုံးအတကျကို ဖွဈနိုငျရငျမိုးလငျးပေါကျ ကွညျ့လိုကျခငျြတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခြိနျတနျရငျ အိမျပွနျရတယျမဟုတျလား။ ခရီးက ဆကျရဦးမယျလနေော့။
နောကျနအေ့ထိ တောငျကွီးစြေးက မဖှငျ့သေးဘူး။ ရကျရှညျပိတျထားတာကိုး။ ဘေးနားပတျပတျလညျက ဆိုငျတှမှောပဲ လိုတာတှဝေယျပွီး တောငျကွီးကို ခှာခဲ့တယျ။ သိပျကွိုကျတဲ့လိမ်မျောသီးကိုတော့ တဈခွငျးပါအောငျဝယျခဲ့တယျ။ စြေးဝယျတဲ့ခွငျးတောငျးသေးသေးလေး မဟုတျပါဘူး။ ခါးတဝကျလောကျ ခွငျးတောငျးရယျပါ။
တောငျကွီးကနစြေေးဝယျပွီး ပွနျဆငျးသာဆငျးခဲ့ရတယျ။ စိတျက မီးပုံပြံတှကေို မပွတျသေးဘူး။ အောငျပနျးစြေးနကွေုံ့လို့ တခါတခေါကျ ဝငျနှဲဖွဈသေးတယျ။ အသှားတုနျးက နှုတျဆကျထားခဲ့တဲ့ ကလောကို ပွနျတောငျးပနျရသေးတယျ။ နှဈတှကွောပမေယျ့ မပကျြစီးသေးတဲ့ နှီးဘုရားရဲ့ အံ့သွဖှယျကိုလညျး ဖူးခဲ့ပါသေးတယျ။ နောကျတော့ မွငျးမထိဂူ။ သာသနာပွုနတေဲ့ ဘကွီးကို တှရေ့တာ ကကျြသရရှေိလိုကျတာ။ အေးခမျြးနတေဲ့ သူ့မကျြနှာရိပျက သိပျနှဈလိုဖှယျကောငျးတာပါပဲ။ ဓါတျမီးလေး ထိုးရငျးအသအေခြာလိုကျရှငျးပွနလေရေဲ့။ အကွိုကျဆုံးနရောကတော့ မောငျးတှေ တီးလို့ရတဲ့ ကြောကျခကျဆှဲတှလေေ။ သူ့ဟာနဲ့သူကို ဟုတျလို့။ အသံစုံသားဗြ။ သဘာဝတရားပဲလား ဆနျးကွယျသားနျော။ သခြောလိုကျပွပေးတဲ့ အဘကို အမကေ ငှကေနျတော့ ရငျး တဈမိသားစုလုံး ဝိုငျးကနျတော့ကွတော့ ပေးလိုကျတဲ့ဆုတှေ မနညျးမနော။ နလေ့ညျစာထမငျးကိုတော့ ကလောက သုမောငျထမငျးဆိုငျမှာပါ။
ကလောကပွနျလာအပွီးမှာတော့ တလမျးလုံး မလှုပျနိုငျကွတော့။ ညစာထမငျးစားအပွီးမှာ ကားအပွငျးမောငျးရငျး ပွနျလာကွတယျ။ အိမျပွနျရောကျတော့ ည ၁၂နာရီထိုးနခေဲ့ပွီ။ ဖကေ မနကျဆိုရုံးပွနျတကျရမယျ။ သားအမိနှဈယောကျတော့ လိမ်မျောသီးဝခွေမျးရေးလုပျတုနျး။ တှကျရေးက စကျသူဌေး တှကျကွညျ့တော့ စကျမရှိဆိုသလို အိမျအတှကျသိပျမကနျြတော့ဘူးလေ။
လူကသာအိမျရောကျနတော တဈအိမျလုံးက နောကျတဈလလောကျထိ တောငျကွီးမှာ ကနျြနတေုနျး။ တောငျကွီးကဘယျလို ကလောက ဘယျပုံ ပငျးတယက ဘယျသို့ဆိုပွီးလေ……
တောငျကွီး ပထမခရီးစဉျ အပွီး….
Posted by Anonymous at 11:02 PM9comments Links to this post
Labels: ချစ်သောမြေ, ပြန်လည်ခံစားဆန်းသစ်ခြင်း, အမှတ်တရ ဘဝခရီး
ပငျးတယကနေ မကေ သူ့ရဲ့ ဝါသနာသဈခှတှေ ဝယျဖွဈအောငျဝယျခဲ့သေးတယျ။ အခုဆို အိမျက သရကျပငျမှာ ပှငျ့နလေောကျရောပေါ့။ မနကျစာစားရငျ ရနျကုနျကညီလေးတို့ နဲ့ အမှတျမထငျဆုံကွတယျ။ အနျတီခငျအေးတို့မိသားစုတှေ ပြျောပြျောပါး ဘုရားဖူးထှကျလာတာတဲ့။ အရငျတုနျးက ကနြျောထိနျးခဲ့ရတဲ့ နိုနိုတို့ ဇိုဇိုတို့တောငျ အရှယျရောကျနပွေီပဲ။ အငျးလကေိုယျတိုငျတောငျ ငယျတော့တာမှမဟုတျတာနျော။
ပငျးတယကပွနျဆငျးလာပွီး တောငျကွီးကို တကျခဲ့ကွတယျ။ ဒီနမေီ့းပုံပြံပှဲစမယျလေ။ ညက မမွငျရလတေဲ့ ရှုခငျးကို မနကျအပွနျခရီးမှာ ငေးရတော့တာပဲ။ ဟိုနရောလေး ဓါတျပုံရိုကျမယျ ဒီနရောလေးဓါတျပုံရိုကျမယျနဲ့ ရှုခငျးတှလှေလသေမြှ ကားပျေါမှာ ဂြီကမြိတော့တာ။ တောငျကွီးကို ရောကျတော့ ၃နာရီထိုးပွီထငျပါရဲ့။ ဦးသငျးတို့ အမတှဆေီကိုပဲတိုကျရိုကျသှားမိတယျ။ လူအလာမြားတဲ့ ရကျမို့ ဟိုတယျက သုံးယောကျစာပဲ စီစဉျပေးနိုငျတယျတဲ့။ အတူတူလာလူ ရှဈယောကျမို့ အားလုံးတညျးဖို့ အဲဒီဗိုလျခြုပျလမျးပျေါက စိုကျပြိုးရေးရုံး ဧညျ့ဂဟောမှာပဲ တညျးဖို့ဆုံးဖွတျလိုကျတယျ။ တောငျကွီးအိမျမှာ ဘှားပုရောကျနတောမို့ ကနြျောတို့ သားအမိတှပြေျောလိုကျကွတာ။ ဟိုမှာ ဘှားပုလာလညျတုနျးက ဟငျးပေါငျး မုနျညငျးစော ကငျပေါငျးကွျောတို့ဆိုတာ နစေ့ဉျရကျဆကျ စားရငျးဘှားပုလကျရာ ရှမျးစာက စှဲနမေိခဲ့ပွီ။
အဲဒီညနမှောပဲ နာမညျကြျောတဲ့ ကက်ကူကိုသှားဖွဈခဲ့တယျ။ အရငျတုနျးကလို အညိုရောငျနယျမွမေဟုတျတော့တာမို့ သှားရေးလာရေးအဆငျပွနေခေဲ့တာ။ လမျးတဈလြှောကျကရှာတှကေို ကွညျ့ရငျး ဆရာမွသနျးတငျ့ရဲ့ ကမ်ဘောဇအကွောငျးရေးထားတဲ့ စာအုပျလေးကို သတိရမိတယျ။
ကက်ကူကိုရောကျတော့ နစေောငျးနပွေီ။ ဘုရားပှဲမှာ ရှမျးအငွိမျ့တှေ ဇာတျတှကေဖို့ ပွငျဆငျနကွေပွီ။ သဈပငျဝိုငျးကွီတှအေောကျမှာ ရှာနီးခြုပျစပျက ဘုရားပှဲတကျစတိုငျက ကနြျောတို့ အညာအတိုငျးပဲနျော။ ဘှားပုပှဲခငျးထဲစြေးဝယျနတေုနျး ကငျမရာတဈလုံးနဲ့ ကနြျောကတော့ ထုံးစံအတိုငျး ငွမျးစငျထားတဲ့ စငျပျေါကို တကျနမေိပွီ။ အနောကျဘကျခြောငျးကလေးကလညျး လှမျးစရာတော့ အကောငျးသား။ ငါးရယျ ခဲတံခြောငျးရယျဝယျလာပွီး မနကျဖွနျငါးထမငျးနယျကြှေးမယျတဲ့ အိုးပြျောစရာကောငျးလိုကျတာ။
အဲဒီညက အပွနျမောခမျးမှာထမငျးသှားစားမယျဆိုပွီး အားကွိုးမာနျတကျခြီတကျခဲ့တယျ။ အဝငျမှာပဲ စားပှဲထိုးလေးတှကေ ကုနျပွီတဲ့ ပွနျတော့တဲ့။ အရိုးခံတိုငျးရငျးသားတှရေဲ့ အရှိကိုအရှိတိုငျးပွောလိုကျတာ ဆာနတေဲ့ ဗိုကျတောငျမသှေ့ားစတေယျလေ။ လမျးမထကျမှာတော့ မီးပုံးတှနေဲ့ အလှပွနကွေပွီ။ ကားနဲ့မဟုတျဘူးနျော လူတနျးကွီးက တနျးစီရှလြေ့ားနတော။ အားလုံးက စူဠာမဏိကို ဦးတညျနကွေတာထငျပါရဲ့။
ကားဆကျမသှားနိုငျတာနဲ့ ကားကိုရပျပွီး လမျးဆငျးလြှောကျကွတယျ။ ဘုရားရောကျဖို့တျောတျောလိုသေးတယျ။ အငျး လောငျးကစားဝိုငျးတှကေ အမြားသား။ အမြိုးသာတှတေငျမက အမြိုးသမီးတဈခြို့တောငျပါသေးတယျ။ ဘုရားထိရောကျဖို့ တျောတျောလြှောကျရပါတယျ။ အနယျနယျအရပျရပျက ဘုရားဖူးတှရေယျ မွို့ခံတှရေယျ ဘုရားရငျပွငျတျောပျေါမှာ အပွညျ့။ ဘုရားတနျခိုးကွောငျ့ထငျပါရဲ့ ပွှတျသိပျနတေဲ့ မှနျးကွပျမှုကို မခံစားလိုကျရဘူး။ ဘုရားရှိခိုးပွီး ပွနျထှကျလာတော့ မှညျးနကျတဲ့ ကောငျးကငျယံမှာ အလှတှဆေငျနကွေပွီ။ ခဏတဈဖွုတျဆိုပွီး ငေးနလေိုကျကွတာ အအေးဒဏျခံရတော့မှ အိမျပွနျဖို့သတိရကွတော့တာ။ ဒါတောငျလမျးတဝကျမှာ ကားရပျပွီးကွညျ့နမေိတဲ့အထိ နောကျဆံကတငျးနခေဲ့တယျ။ ပငျပနျးမှုအပွညျ့နဲ့ အိပျပြျောသှားခဲ့တဲ့ ညတဈညပေါ့။
မနကျမိုးလငျးတော့ ရခြေိုးဖို့ကွိုးစားရတယျ။ မခြိုးဖွဈတာ နှဈရကျရှိပွီလေ။ မနကျစာစားအပွီးမှာတော့ အငျးထဲဆငျးဖို့ပွငျကွရတယျ။ ကြောကျမဲက ဧညျ့သညျတှနေဲ့ ကားနှဈစီးပွိုငျထှကျခဲ့ကွတာ။ အငျးထဲမှာ စကျလှမေကနျြတော့တာမို့ ညောငျရှကေ အမြိုးတှကေို စီစဉျခိုငျးလိုကျရတယျ။ အငျးလေးကို ရောကျရဦးမှာပေါ့……..
Posted by Anonymous at 9:19 PM4comments Links to this post
“ သူ့အတှကျအလှမျးပွေ ပနျးတှတေဈပှငျ့ဆီ ခွှကောမွမှော စုထားရရငျကှယျ ခုမြားဆို စကားဥပမာပွောလို့နှိုငျးတယျ မောတို့တိုငျးရဲ့ရှမျးတောငျတနျးသဖှယျ ဖွဈနမေယျထငျတယျ” ဆိုတဲ့ သီခငျြးလေးကွားတိုငျး အဲဒီမရောကျဖူးလတေဲ့ အလှမျးတောငျတနျးတှဆေီကို သှားခငျြနမေိတယျ။ တခါတခေါကျ အရောကျသှားခငျြစိတျက တဈဘဝလုံးစာကို ကွီးစိုးနတေော့တာ။ ငယျတုနျးကတော့ မကေ လူရညျခြှနျဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ ဖွားယောငျးဖူးတယျ။ ညီလငျးညိုတို့ အမာညိုတို့ လိုပေါ့ အငျးလေးတို့ ငပလီတို့ကို လူရညျခြှနျဆိုတဲ့ အိပျမကျနဲ့ မကျခဲ့ကွသလိုပေါ့။ တဈမြိုးတော့ တဈမြိုးပဲနျော သမဝါယမမှာ ပစ်စညျးထုတျသလိုမြိုး ဒီတဈမြိုးယူမှ နောကျတဈမြိုးပေးမယျဆိုတာမြိုးလဗြော။
ကြောငျးသငျခနျးစာတှေ အားလုံးပွီးတဲ့နမှေ့ာ အိမျကိုခဏအပွနျ။ နဂိုတညျးက ရောဂါပေါတဲ့ မမှေ့ာ နောကျထပျအသဈနှဈမြိုးရှိနပွေနျပွီတဲ့။ ဆရာဝနျက စိတျပွလေကျပြောကျ ခရီးထှကျဖို့ပွောတော့ အဲဒီတောငျကွီးဆိုတဲ့အရပျကို ဦးတညျခဲ့ကွတယျ။ အားလုံးစီစဉျပွီးတဲ့နောကျမှာတော့ ခရီးတဈခုစဖွဈခဲ့တယျ။ ကမျးတဈဖကျအကူးမှ သတိရတာက ဦးတိကဖြရေယျ သူ့မှတျပုံတငျမပါလာခဲ့ဖူး။ ကားလိုငျစငျတော့ ပါတာမို့ ပွနျမလှညျ့တော့ပဲ မကှေးဖကျမှာပဲ မနကျစာစားဖွဈခဲ့တယျ။ တရှရှေ့မေ့ောငျးလာလတေဲ့ ကားနဲ့ ကြောကျပနျးတောငျးက ဖိုးပွုံးခြိုမှာပဲ ထမငျးစားမယျထငျခဲ့တာ တကယျတော့ လဘကျပွားရောကျမှာစားဖွဈတော့တယျ။ ငါးသတ်ေတောကို ခရမျးခဉျြသီးနဲ့ ကွကျသှနျနိုငျနိုငျသုပျလတေဲ့ ဒီဟငျးအမညျက အသဈဖွဈစခေဲ့တယျ။ ကွကျသားကွျောမှာ နာမညျကြျောတဲ့ အရပျမို့ မဝယျမဖွဈကွကျသားကွျောလညျးပါတာပေါ့။ ဝယျလာတဲ့ ကွကျသားကြျောကို တဈလမျးလုံးစားသှားလိုကျတာ ပါးကိုညောငျးယူရော။ ဘယျလောကျဝယျခဲ့လဲဆိုတော့ အသညျနှဈသညျကို အားနာတာနဲ့ နှဈဗနျးထဲရယျပါ။ 
အမှတျမထငျ ကားသမား အဈကိုကွီးနဲ့ လဘကျပွားသူလေးရဲ့ဇာတျလမျးလေး ကိုလညျး ကွုံခဲ့ရသေးတယျ။ ခရီးသှားလာရငျးအကွုံကွိုကျပမေယျ့ တစှဲတလမျးရှိတဲ့ အဈကိုကွီး အိမျက သဘောမတူတာမို့ နှဈယောကျသားဝေးနလေိုကျကွတာ။ ကိုသကျအောငျခမြာ ဆုံးသာသှားရော ပေါငျးမသှားရဖူးထငျပါရဲ့။ အခဈြစဈတို့သညျလညျး ဆုံနိုငျခှငျ့ ကွုံခဲတတျဘိခွငျး။
သာစညျနညျးနညျးကြျောတော့ မွငျကှငျးတှကေ ပွောငျးစပွုလာပွီ။ လမျးကတော့ ကဉျြးသေးတယျ။ ဖုံထူတဲ့ အညာမွနေဲ့ မောမွတေံခါးဝက စတငျကှာခွားစပွုလာပွီ။ လမျးဘေးတဈဖကျတဈခကျြကလညျး ကုက်ကိုပငျကွီးတှထေငျပါရဲ့။ တဈခြို့ဆို လကျနှဈဖကျစာတောငျ မလောကျနိုငျတော့လောကျအောငျ ကွီးမားနပွေီ။ ဒါပမေယျ့ရာသီဥတုကတော့ ပူနှေးဆဲ။
တရဈပွီးတဈရဈ တကျလာပွီးတဲ့နောကျမှာ ရဖွေူလား ဝကျဖွူလားမမှတျမိတော့ပါ။ တောငျတှပေျေါကို တကျလာနပွေီဆိုတာ သတိထားမိတယျ။ လိမ်မျောသီးကငျးတှမွေငျတော့ ငေးလိုကျကွတာ။ ကလောကို မကွာခငျဝငျတော့မယျ။ မွနေီတှေ မွငျနရေပွီ။ ကောငျးကငျကလညျး ပွာလိုကျတာနျော။ မွို့အဝငျမှာတော့ ထုံးစံအတိုငျး အညောငျးပွအေညာပွေ လမျးဆငျးလြှောကျရပါသေးတယျ။ ကလောမွို့လေးလှပငျမယျ့ နရေဈဦးပေါ့။
ကလောပွီးတော့ အောငျပနျးထငျပါရဲ့။ မှတျဉာဏျတှလေညျး ခြို့တဲ့နခေဲ့ပွီ။ အောငျပနျးမှာ ကားခဏရပျတော့ ပွေးလာလိုကျတဲ့ လိမ်မျောသီးသညျတှေ မနညျးပါလား။ ကြောငျးသားအရှယျ လိမ်မျောသီးသညျလညျးတှပေ့ါရဲ့ ကြောငျးမှတကျရဲ့လားမသိ။
အောငျပနျးကအထှကျမှာ ပငျးတယကိုသှားဖို့ ရှမျးပြိုနှဈယောကျက အကူတောငျးတာမို့ နောကျခနျးမှာချေါတငျရငျး သူတို့ရဲ့ ဘဝကို မေးနမေိတယျ။ ပငျးတယမရောကျခငျ ရှာကွီးတဈရှာကပါ။ အခုလညျးကုနျသှားသှငျးပွီးပွနျလာတာတဲ့။ ထုံထုံနဲ့မောငျးနတေဲ့ ထျောလာဂြီတှမေစီးဖူးလားဆိုတော့ ရီပွီးဖွတေယျ နှေးလို့မစီးခငျြဘူးတဲ့။ မွပွေနျ့မှာအလုပျရှိရငျ ချေါပါဆိုလို့ရီခဲ့ကွသေးတယျ။ အခုဒီမှာတဈနေ့ ငါးဆယျပဲရတာ တနကေုနျအောငျလုပျရတာဆိုမှ အရယျမကျြနာတှေ ငိုမဲ့မဲ့ဖွဈခဲ့ရတယျ။ ဟုတျမယျ ရှမျးမတှဆေိုပမေယျ့ မဖွူကွရှာပါဘူး။ အပွနျကွဝငျပါရှငျ့ ဂျေါဖီတှတေငျတဲ့ကား ကိုမွငျရငျ ဝေးလို့သာ အျောလိုကျ လာချေါမယျရှငျ့တဲ့။ တရှငျ့ရှငျ့ပွောတတျတဲ့ ရှမျးပွညျရဲ့ စကားသံကနားထဲကို စိမျ့ဝငျလှယျတယျနျော။
ပငျးတယရောကျတော့ အမှောငျလုနပွေီ။ ထမငျးဆိုငျတှေ အားလုံးပိတျနပွေီ။ ကွံလိုကျတဈဆိုငျတော့ မီးမပိတျသေးတာမို့ အပွေးအလှား သှားစားရတယျ။ လတျဆတျတဲ့ အသီးအရှကျတှကွေောငျ့လား ရှမျးပွညျမှာ ထမငျးစားရတာ မွိနျလိုကျတာ။ ထမငျးစားပွီးရငျ ကုံလုံကို ခြီတကျခဲ့ကွတယျ။ လမျးတဈလြှောကျ တောငျးနတေဲ့ ကလေးတှကေ ပဈခသြူတှကွေောငျ့လား အကငျြ့တှပေါကုနျကွပွီထငျပါရဲ့။ ခြိုခဉျြတှေ ကလှဲရငျ ပိုကျဆံပဈမခခြငျြခဲ့တဲ့ ကနြော့စိတျက အဆနျးသား။
ကြောငျးရောကျတော့ မိုးခြုပျနပွေီ။ တခွားဘယျမှာမှ မရှိတဲ့ ဧညျ့စာရငျးကိုတိုငျရငျး မနကျစာ အာရုံဆှမျးကပျဖို့ လြှောကျဖွဈတယျ။ မနကျလေးနာရီမှာ မကျြနှာသဈတော့ ခှကျကိုတောငျ ကောငျးကောငျးမကိုငျနိုငျတော့ အေးစကျလို့ကငျြတကျနခေဲ့ပွီ။ ခေါငျးလြှျောမယျဆိုတဲ့ အသံကွားမှာ ရခြေိုးဖို့တောငျ အားမမှေးရဲတဲ့ ကနြျောတို့တဈတှေ ရီနကွေရတာပေါ့။ မနကျငါးနာရီထရငျး ရှမျးကိုရငျတှကေို ဆှမျးလောငျးကွရတယျ။ သကျသကျလှတျပဲပုပျခကျြနဲ့ အသီးအရှကျပါပဲ။ တဈပါးခငျြးရဲ့ သပိတျထဲကိုလောငျးထညျ့ရငျး ကုသိုလျတဈရားတှပေဲ ပှားနမေိတော့တယျ။ ပွီးတော့ ကုံလုံဆရာတျော အဖူးအမွျောခံတဲ့ ဓမ်မာရုံကိုပေါ့။ ဆရာတျောကို ဖူးအပွီး ပွနျဆငျးလာခဲ့ကွတယျ။ ပငျးတယ ရှဥေမငျကို ဝငျရငျးပါ။ တောငျပျေါမတကျခငျ လကျဖကျတှမွေညျးရတာ ပြျောဖို့ကောငျးတယျ။ ဝါးဆဈထဲက လကျဖကျတှကေ ဘာကွောငျ့အရသာပိုရတာပါလိမျ့။ မြားပွားလှတဲ့ ဘုရားတှကွေားမှာ တကယျ့ကို ကွညျညိုဖို့ကောငျးလိုကျတာ။ တောငျပျေါက အမွနျဆငျးပွီး ပုတျတလုပျကနျရပွေငျကိုငေးရသေးတယျ။ ကွီးမားလှပတဲ့ သဈပငျတှကေလညျး အပွိုငျးအရိုငျးဆိုတော့ ရှမျးပွညျလှတာ တကယျပါပဲပေါ့ဗြာ။
ဓာတျပုံလေးက ဒီကယူပါတယျ http://i.pbase.com/g6/48/734148/2/73669869.NSRVzay4.jpg
Posted by Anonymous at 10:09 PM6comments Links to this post
အီကွေတာနဲ့ပဲနီးလို့လား တချက်တချက်တိုက်လေတဲ့ ဒီနိုင်ငံကလေတွေက ပူပြင်းလွန်းတယ်။ အဲလိုနဲ့တိမ်တွေ အထပ်ထပ်ဖွဲ့လာခဲ့ရင်လည်း မကြာခဏမိုးအဖြစ်ရွာချတတ်တယ်။ နင်နဲ့ငါရဲ့ စိတ်ကူးထဲကအိမ်လေးဟာလည်း ရွာချတဲ့ မိုးတွေနဲ့အတူ ပျောက်ပျက်ခဲ့ပြီထင်ပါရဲ့။ ရွာနေတာ မိုးရေတွေလား နင်နဲ့ငါရဲ့ မျက်ရည်တွေလား……..ဟင်…
အရင်တုန်းကတော့ တို့နှစ်ယောက်သိပ်ချစ်ခဲ့ကြတယ်။ မရှိလေတဲ့ အရပ်မှာ ငါးပိရည်ပဲစားရစားရပေါ့။ နင်ရတဲ့လခ သုံးလေးသောင်းရယ် ငါရတဲ့လခငါးသောင်းခြောက်သောင်းရယ်နဲ့ လူမွေးလူတောင်မပြောင် အဆောင်အယောင်အခမ်းအနားတွေ မပါပေမယ့် ငါတို့သေချာပေါက်ပျော်ခဲ့ကြတယ်။ အများကစကားတင်းဆို ပြစ်ဖွဲ့ဆိုကဲ့ရဲ့လည်း ငါတို့နှစ်ယောက်တွဲလက်မဖြုတ်ပဲ တစ်ယောက်လက်တစ်ယောက်အုပ်ပြီး ကိုင်ဆွဲထားခဲ့မြဲနော်။ ဒါပေမယ့် နင့်မိဘ ငါ့မိဘအသိုင်းအ၀ိုင်းတွေအတွက် တာဝန်တွေကိုယ်စီပိုင်းပြီး ယူကြမယ်လို့ ထားခဲ့တဲ့ ကတိက၀တ်တွေက ရေကြည်ရာမြက်နုရာဆိုတဲ့ အပြင်ဘက်ဝေးရာဆီကို လှမ်းစေခဲ့တယ်။ အရင်ဆုံးအဆင်သင့်သွားတဲ့ နင်က အရင်သွားခဲ့ပေမယ့် နောက်ဆံတင်းတတ်တဲ့ ငါက ငါ့မိဘအတွက် အခြေကျ အနေလှအောင် အစစအရာရာ စီမံရသေးတော့ နောက်ကပေါ့။
ငါရောက်စကတည်းက စသတိထားမိတာ နင်အရမ်းပြောင်းလဲသွားတယ်နော်။ အေးလေအရင်လို သုံးလေးသောင်းဆိုတဲ့ ၀င်ငွေမျိုးမှမဟုတ်တော့တာ။ အ၀တ်အစားဆိုရင် Brand မှ အစားအစာဆိုရင်ဘာမှ ဖြစ်နေခဲ့ပြီ။ တိုးတက်ခေတ်မှီတဲ့ လူနေမှုပုံစံသစ်ထဲမှာ မူးယစ်နေခဲ့ပြီပေါ့။ ဒူးအထက်နားမှာအမြဲ ရှိတဲ့ တိုနံ့နံ့တွေနဲ့ယဉ်ပါးနေပြီဆိုတော့ ငါအမှတ်တရပေးထားတဲ့ ချင်းဝတ်စုံဝမ်းဆက်လေးကို ဘယ်တန်ဖိုးထားပါတော့မလဲနော်။ သွက်လက်ထက်မြက်မှုတွေနဲ့အတူ နင့်ရဲ့ရိုးသားခြင်းတွေပါ အရောင်မပြောင်းသွားဖို့ ငါဆုတောင်းပေမယ့်….
ငါတို့နှစ်ယောက်သတ်မှတ်တဲ့ အခြေအနေရောက်ရင် ပြန်ကြရအောင်ဆိုတော့ “ ဘာပြန်လုပ်မှာလဲတဲ့” မေးရက်လိုက်တာဟာ။ “ဒီနိုင်ငံဟာ ငါတို့ရေမြေမဟုတ်ဘူးလေ အထူးသဖြင့်ငါချစ်တဲ့ မြေမဟုတ်ဘူး” ဆိုတော့ “ နင်သိပ်ချစ်ရင် အဲဒီမှာပဲ နေပါလား ဘာဖြစ်လို့ အဝေးကိုထွက်လာသေးလဲ” တဲ့။ အဲဒီမေးခွန်းရဲ့ အဖြေကို နင်သိသားနဲ့။ “မဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့ ငါတို့ရဲ့အမိနိုင်ငံကို နင်ထည့်တွက်သင့်တယ်” ဆိုတဲ့ အပြောကို
“နင်ဟာသိပ်အူကြောင်ကြောင်နိုင်ပါလား သူများတကာလည်း ဒီလိုပဲ ငါတို့လဲဒီလိုပဲပေါ့” ဆိုတဲ့ အဖြေနဲ့ကာခဲ့တယ်နော်။ “ဟိုရောက်ရင် သုံးလေးသောင်းနဲ့ ဘာသွားစားမလဲ”ဆိုတဲ့ အမေးကို မဖြေနိုင်တဲ့ နောက်မှာ ငါဟာ ဆွံ့အသူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ နင်ရဲ့ အရောင်ပြောင်းသွားတဲ့ စိတ်ဓာတ်အတွက် ငါ့ရင်ဘတ်တွေ တအက်အက်နာကျင်ခဲ့ရတယ်။ အဲဒီညက ဖန်ခွက်တွေ တခွက်ခြင်းခွဲနေမိပေမယ့် တကယ်တမ်းကွဲကြေနေရတာက ငါ့နှလုံးသားပါဟာ။
ဘ၀တစ်ခုကို အသစ်ကနေပြန်စမယ့် လူတစ်ယောက် တစ်ချိန်ချိန်မှာ အမိမြေကို ပြန်မယ့်လူတစ်ယောက်ရဲ့ အရိပ်ဟာ နင့်အတွက်မလုံခြုံနိုင်ပါဘူး။ နင်လိုအပ်တဲ့ အရာတွေဟာ ငါပေးနိုင်တဲ့ မေတ္တာတရားနဲ့တင် မဖြည့်စွမ်းနိုင်တော့ဘူးထင်ပါရဲ့။ ပျံပါလေ ပျံပါ ရွှေဟင်္သာတွေ ရှိတဲ့အရပ်ကိုပဲ ပျံပါ။ နင်ရဲ့အလိုမကျခြင်းတွေကိုပဲ ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ ငါလိုလူကို သနားမငဲ့ ထားခဲ့ရက်နိုင်ပါတယ်။
အိပ်မက်ဆိုတာ တခါခါ ပန်းတိုင်တစ်ခုအဖြစ်ကို ပြောင်းမသွားတတ်ပါဘူး။ မိုးတိမ်တွေကနေ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ပြီး ရွာချတတ်သလို အိပ်မက်အဖြစ်မက်ခဲ့ဖူးတဲ့ မိုးတိမ်တွေထဲကအိမ်ကလေးလည်း လွယ်လွယ်ကူကူပျောက်ပျက်သွားတယ်ထင်ပါရဲ့။ အခုလည်း မိုးတွေရွာပြန်ပြီ် ကိုင်ဇာရဲ့ “ တူနှစ်ကိုယ်မှန်းတဲ့ အနာဂတ်အချစ်တိုင်းပြည် ထူထောင်နိုင်ရန်စွန့်စားမည်” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို တစ်ချက်လောက်ပိတ်ပေးပါဗျာ။
Posted by Anonymous at 9:00 PM 11 comments Links to this post
အကြွေးရှင်ကိုဂျုလိုင်က တချိန်းချိန်းလာချောင်းနေတော့ရေးလိုက်ပါပြီဗျာ။ တောသားလေးဝိုင်တီယူရဲ့ ဖြိုသလစ်မျာအကြောင်း….
ငယ်တုန်းကတည်းဖြိုသလစ်တွေက စခဲ့တာပါ။ ဆောင်းတွင်းဆို မေက ဆေးရုံတက်ပြီး အောက်ဆီဂျင်ရှူနေကြလေ။ အိမ်မှာ ကျန်နေခဲ့တဲ့ ကျနော်တို့တွေက ဖေ့တပည့် ဦးဇော်ကြီးတို့ရဲ့ စီမံချက်ပြုတ်မှုနဲ့ပဲပေါ (ကြက်ဥကြော် လက်ဖက်သုတ်မထပ်စေရဘူး တစ်မျိုးတစ်လှည့်စီ)့။ မနက်စောစော ၅နာရီစာထဖတ်တတ်တဲ့ ကျနော့တာဝန်က အလွန်ခက်ခဲလေတဲ့ ထမင်းပေါင်းအိုးနဲ့ထမင်းချက်ခြင်းပါပဲ။ မီးက ၂၄နာရီလာတဲ့စက်ရုံနယ်မြေဆိုတော့ မီးဖိုခြင်း ဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့ ကင်းဝေးခဲ့ပါတယ်။ မေဆေးရုံကဆင်းလာပြီဆိုရင်တော့ သူညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း ထုပါဟဲ့ ထောင်းပါဟဲ့ ခွာပါဟဲ့ နွှာပါဟဲ့ ဆိုတာကို ကူလုပ်ပေးရတတ်ပါတယ်။ ဟင်းတစ်အိုးလုံးပြီးမြောက်အောင် မချက်ဖူးပေမယ့် အစီအစဉ်တွေက ခေါင်းထဲမှာ စွဲခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ ဟင်းအိုးအကြည့်ခိုင်းလေတိုင်း စာအုပ်တစ်ဖက်ဖြစ်ဖြစ် ကစားစရာတစ်ခုဖြစ်ဖြစ် တွဲထားမိတော့ အိမ်မှာ မောင်တူးတူးဖြစ်တတ်မြဲပါ။
ဆယ်တန်းအောင်လေတော့ ဖေက ငါတို့အမျိုးတွေထုံးစံအတိုင်း သူများအိမ်မှနေရမယ်ဆိုပြီး အဝေးကိုလွှတ်ခဲ့တယ်။ မီးသွေးကျုံး ဆန်အိတ်ထမ်းဘ၀လေးပေါ့။ အိမ်ရှင်အဒေါ်က ခရီးထွက်သွားတဲ့ အချိန်မှာပဲ အဲဒီမီးဖိုချောင်ဇာတ်လမ်းက စတော့တာပါ။ ပထမဆုံးစချက်တဲ့ ရေခမ်း ထမင်းက ဆန်ပြုတ်ဖြစ်သွားခဲ့တာပါပဲ။ အိမ်က အစ်ကိုကြီးတစ်ယောက် ဆန်ပြုတ်ကြိုက်ပါတယ်ဆိုပြီး အားပေးသွားတာ တစ်အိုးလုံး ကုန်သွားခဲ့တဲ့အထိ။ ဖြစ်သလိုပင်မယ့် အဲလိုအောင်မြင်ခဲ့တာပါ။ ထမင်းကြော်ကြော်တော့လည်း အမချိုသင်း အမျိုးသားလို ထမင်းတွေထဲ ကြက်ဥတွေဆမ်းပြီး မကျက်ပဲ အရည်တရွှဲရွှဲနဲ့မို့ နှာခေါင်းပိတ်စားတောင်မရခဲ့လို့ သွန်ပစ်ခဲ့ရဖူးပါတယ်။
နောက်တော့လည်း အစားမက်တဲ့လူဆိုတော့ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဟင်းတွေကို ချက်တတ်ခဲ့ပါတယ်။ သင်ဆရာမြင်ဆရာကတော့ မေပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အရိုးမပါတဲ့ အဲဒီလျှာရဲ့ ရသတဏှာနောက်ကို လိုက်နေမိတော့လည်း ဒုက္ခကို သုခလို့ထင်ချင်ထင်နေတော့တာကိုး။
ဒီကိုရောက်လာပြီးမှ အစားအစာတွေက ကိုယ်နဲ့ဘယ်လို့မှမအပ်စပ်။ချိုရင်ချို ဘာမှအရသာမရှိလေတဲ့ လက်ဆေးရေ ဟင်းချိုတွေပဲ တွေ့နေရတယ်လေ။ နေ့လည်ထမင်းစားကိုတော့ ရုံးနားက ကန်တင်းမှာ ၁၂၃၄ ရေပြီးအလှည့်ကျအားပေးလိုက်ပါတယ်။ စားလို့မြိန်လားဆိုရင်တော့ အင်အားရှိအောင်စားနေရတာပါလို့ပဲ ဖြေရပါမယ်။
ဟိုဘက်တစ်လလောက်ကနေစပြီး ရုံးပြန်လာရင် ထမင်းမစားချင်တဲ့ ပြဿနာတက်နေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော့ညနေစာတွေက ဖြစ်သလို အသီးတွေ ဒါမှမဟုတ်ပေါင်မုန့် ပြီးတော့ ကော်ဖီပေါ့။ တခါတလေစားချင်စိတ်ရှိရင်တော့ စားဖြစ်ပါတယ်။ သူများတွေချက်ထားတာကို အခန့်သားထိုင်စောင့်ပြီးစားတတ်တာပါ။ (ဘော်ချက်တာလဲဖြစ်နိုင်တယ်နော်)။
စနေ၊ တနင်္ဂနွေဆိုရင်တော့ ကောင်းကောင်းကန်းကန်း ချက်စားဖြစ်ပါတယ်။ လာစားမယ်ဆိုရင်တော့ ကြိုပြောပါဗျာ။ ဖြိုသလစ်ကိုစားနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ အချိန်မရွေးပေါ့။ ကိုဂျူလိုင်ရေ ကျေနပ်တော့နော့………………………
ပုံလေးကိုတော့ ကျနော်ကြိုက်တဲ့ ကာတွန်းကားကပုံလေးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by Anonymous at 2:25 PM 14 comments Links to this post
ရင်ထဲ အသည်းထဲထိအောင်လှိုက်စားတတ်တဲ့ ပိုးမို့ ရင်လှိုက်ပိုးလို့ အမည်တပ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီပိုးက တစ်ချိန်လုံးထကြွလေတဲ့ပိုး ပြန်လည်ဖျောက်ဖျက်ပစ်ဖို့ ခက်ခဲစေတဲ့ပိုးပါ။ အခုလည်း ကျနော့မှာ ရင်လှိုက်ပိုး ရှိနေခဲ့ပါပြီ။
ဒီနှစ်ရဲ့အစ မတ်လရဲ့နေ့တစ်နေ့မှာ ကျနော်တို့သူငယ်ချင်းတွေစုပြီး မုန့်ဟင်းခါးချက်စားကြတယ်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ကွန်ပြူတာကိုသုံးပြီး သင်တန်းတစ်ခုက ညီမငယ်တစ်ယောက်နဲ့စကားပြောဖြစ်တယ်။ သူစာဖတ်နေတယ်တဲ့။ ကျနော်သိတဲ့ ညီမငယ်တစ်ယောက် စာရေးနေတယ်ဆိုပါလား။ သူပေးထားတဲ့ လင့်လေးကနေ သွားကြည့်မိတယ်။ “ရွှေပြည်သူ” ပါတဲ့။ Mayonnaise ပုလင်းနဲ့ကော်ဖီ (၂)ခွက် ပို့စ်လေးက တော်တော်ကို ကောင်းပါတယ်။ မူရင်းအင်္ဂလ်ိပ်လိုကို မေးလ်မှာဖတ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဘာသာပြန်တော်တဲ့ညီမငယ်ရဲ့စာက ကျနော့ရင်ဘတ်ကို ထိရှခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ကျနော်တို့သူငယ်ချင်းတွေ စိတ်ဝင်စားပြီး အပြန်ပြန်အလှန်လှန်ကြည့်နေမိတာက စကားပြောတဲ့ ခွေးကလေး ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပါ။ ညီမငယ်ရွှေပြည်သူဆီကို ဖုံးဆက်ပြီးစတော့ သူ့ခမျာထိတ်ထိတ်ပြာပြာဖြစ်ခဲ့ရှာတယ်။ ရွှေပြည်သူဆိုတာ သူပါလို့ သိတဲ့လူသိပ်မရှိခဲ့လို့ပါ။ ညီမငယ်ရေ ခုတော့ ၀ဋ်ဆိုတာ ၀ါမထပ်ဖူးတဲ့ နောက်တစ်နှစ်တောင်မကူးလိုက်ပါဘူးဗျာ။ အဲဒီကမှ ကျနော်စာရေးချင်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြောဖြစ်တယ်။ မူလဦးတည်ချက်ကတော့ ကျွန်းအိပ်မက်လိုစာတွေ ရေးပေးချင်လို့ပါ။ တွေ့သမျှလူတိုင်းရဲ့ ထပ်တူညီတဲ့ မေးခွန်းတွေရဲ့ အဖြေကို တစ်နေရာရာမှာ စုထားခဲ့ချင်မိတာ။ မအားမလပ်တဲ့ကြားကနေ သူဆောက်ပေးထားတဲ့ ဒီဘလော့လေးထဲမှာ အရင်နှစ်က ရေးဖူးခဲ့တဲ့ စာအဟောင်းလေးကိုပဲ အားမနာလျှာမကျိုး သူ့ကိုပဲစာရိုက်ဖို့အကူအညီတောင်းပြီး တင်စေခဲ့တယ်။ မညီးမညူကူညီတဲ့ အပြင်အားပေးမှုတွေပါပေးခဲ့တဲ့ ရွှေပြည်သူပါပဲ။
ဆောက်ပြီးတဲ့ ဘလော့အသစ်ကလေးကို အစ်ကိုရုပ်ဆိုးကို ပြကြည့်မိတယ်။ ရောဂါပိုးကို တစ်ယောက်တည်း မခံစားပဲ ဖြန့်ကျက်ခံစားခဲ့မိတယ်။ အချိန်တွေကို အလဟဿကုန်မှာထက်စာရင် ၀ါသနာပါတဲ့ စာရေးခြင်းနဲ့ကုန်ဆုံးချင်မိတယ်။ ပျင်းရိညီးငြွေ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ညနေတွေကို အသက်ဝင်အောင်ကြိုးစားနေခဲ့တာပါ။ တကယ်တန်းတော့ ကျနော်က စာရေးဆရာတစ်ယောက်မဟုတ်ခဲ့သလို ဘလော်ဂါတစ်ယောက်လို့လည်း မဆိုနိုင်ပါဘူး။ အမှန်က ကျနောဟာ စာရေးသူတစ်ယောက်သက်သက်ရယ်ပါ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်ရေးခဲ့တဲ့ စာတွေတိုင်းမှာ ကျနော်အားတွေထည့်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်နေ့တစ်ပုဒ်တင်ရမယ်ဆိုပြီး ပြီးစလွယ်ပေါ့ပျက်ပျက် မတင်ရက်ခဲ့ပါဘူး။ အကြိုက်မတူ အတွေးမတူ အယူအဆမတူခဲ့ရင် လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲပိုင်ခွင့် ဝေဖန်ပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။ သို့ပေမယ့် လှောင်ပြောင်ပြက်ရယ်ပြုခြင်းကိုတော့ ကျနော့ စိတ်ကလက်မခံနိုင်ပြန်ပါဘူး။ စာရေးနေတဲ့ စာရေးသူတစ်ယောက်ဆိုရင် ဒီခံစားချက်ကို နားလည်ပေးနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ စာမရေးတတ်ဘူး ပေါက်ကရတွေရေးနေတယ် ဘာတွေရေးမှန်းမသိဘူးဆိုရင်တော့ တကယ့်ကို အရည်အချင်းမပြည့်ဝတဲ့ လိုအပ်ချက်တော်တော်များများနဲ့ စာရေးသူတစ်ယောက်ဟာ ကျနော်ပါပဲလို့ အမှန်အတိုင်းဝန်ခံပါတယ်ဗျာ။
စာရေးခြင်းဆိုတဲ့ ဟောဒီရင်လှိုက်ပိုးကို အူလှိုက်သည်းလှိုက်အကိုက်ခံရပြီးပါပြီ။ တစ်နေ့တစ်နေ့ဝင်မကြည့်ရ မဖတ်ရရင်မနေနိုင်တဲ့ အရှေ့အရှေ့က စီနီယာတွေလို ဘလော့ရောဂါက တော်တော်ကို ကျွမ်းနေခဲ့ပြီ။ ကုသလိုမရနိုင်တော့တဲ့ တစ်ချိန်လုံး တလှုပ်လှုပ်တရွတရွဖြစ်စေတဲ့ အဲဒီရင်လှိုက်ပိုးက အခုအချိန်မှာ အမြစ်တွယ်တာ မှတော်တော်နဲ့ကို ခွာချလို့မရနိုင်တော့အထိ……………………………….
Posted by Anonymous at 10:58 PM 15 comments Links to this post
အမှတ်တရ ဘဝခရီး (200)
အမှတျတရဘဝ ခရီး (29)
ရယျမောခွငျး ပြျော ရှငျမှု ရာခိုငျနှုနျး - ရယျခွငျး ဘယျနှဈ မြိုး ရှိမလဲ .. ဟာသကို ရယျတယျ စိတျမွူးလို့ ရယျတယျ သဈရှကျလှုပျလို့ ရယျတယျ လှောငျရယျတယျ ရှဲ့ရယျတယျ ရယျခငျြဟနျ ဆောငျတယျ .. ကမြတို့ လူတှေ ရယျမ...
“နှလုံးဖွငျ့ နားဆငျ ခွားသညျ့ ပုံပွငျ” - နှောငျးလူတှေ ဟာ ကှဲပွား သော ပုံ ပွငျ ကို နားထောငျကွပါစေ။ ****** ဘုနျးကွီး ကြောငျးဝငျးထဲ ဝငျလိုကျတာနဲ့ သဈရိပျ ဝါးရိပျ ကွောငျ့ အပူဒဏျ ဟာ သိသိသာသာ လြော့ ...